တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ဒွေး - ကွယ်လွန်ခြင်း
Posted by မေဓာဝီ at 2:55 PM
တကယ်စိတ်မကောင်းဘူး မမေရေ ။ ဒွေးကို မင်းသားတွေထဲ တယောက်ထည်းအနေနဲ့ အရမ်းကို ကြိုက်တာ ။
တကယ်ပဲ.. ညီမတို့ဟာ အချိန်မရွေး သေသွားနိုင်တယ်း(
သူ့ကို ခုနောက်ပိုင်း မကြိုက်တော့ပေမဲ့ အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ စိတ်မကောင်း တော်တော်ဖြစ်မိပါတယ်...
မမေရဲ့ အဆုံးပိုဒ်လေးကို ဖြည့်ချင်တယ်...
"အသေမဦးခင် ဥာဏ်ဦးအောင် ကြိုးစားအားထုတ်ပါတော့မည် အရှင်ဘုရား"
7/11/2007 3:37 PM
7/11/2007 4:07 PM
7/11/2007 5:20 PM
7/11/2007 5:23 PM
7/11/2007 5:34 PM
7/11/2007 5:45 PM
atmf .......... aeYjrifnaysmuf ygyJvm;/
atmf .......... igwdkYwpfawG aoZdkYta&;udk arhaeMuwm/
atmf .......... tawG;ukd,fpD vlYavmuxJ &kef;uefvSKyf&Sm;
atmf .......... aemufqHk;awmhvJ r&PqDodkY OD;wnfaeMuygvm;/
အနုပညာရဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့် ဖြစ်တဲ့ ကိုသားကြီး ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကိုသားကြီး ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် ကိုသားကြီးကို ချစ်သော ပရိသတ်များ မိသားစုများ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများနဲ့အတူ ကြေကွဲမိပါတယ်ဗျာ ဖြစ်လေရာဘ၀မှာ ကိုသားကြီးတစ်ယောက် ပြည်သူချစ်သော အနုပညာရှင် ကြယ်တစ်ပွင့် အဖြစ် ဆက်လက်တည်မြဲနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုသားကြီးတစ်ယောက် ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ . . . ။
အော် .......... နေ့မြင်ညပျောက် ပါပဲတကား။
အော် .......... ငါတို့တစ်တွေ သေဖို့အရေးကို မေ့နေကြတာ။
အော် .......... အတွေးကိုယ်ဆီ လူ့လောကထဲ ရုန်းကန်လှုပ်ရှား။
အော် .......... နောက်ဆုံးတော့လဲ မရဏဆီသို့ ဦးတည်နေကြ။
အော် .......... သတိရလျက် မင်းသားဒွေး၇ယ၊်
7/11/2007 6:12 PM
7/11/2007 6:20 PM
7/11/2007 6:29 PM
7/11/2007 6:46 PM
7/11/2007 7:46 PM
"" ကျမတို့ဟာ အချိန်မရွေးသေနိုင်တယ်ဆိုတာကို မေ့နေခဲ့ကြတယ်။ သေခြင်းတရား ဟာ လက်တကမ်းမှာရှိတာပဲ။ ဘ၀ဆိုတာ တိုတိုလေး။ ရေပွက်ပမာတဲ့ … ။ ဖတ်ခဲ့ဖူး နာခဲ့ဖူးပါတယ်။ ""
အရမ်းမှန်ပါတယ် အစ်မရေ။ လူဆိုတာ တရားသဘောနဲ့ကြည့်ရင် သေဖို့ပဲ မွေးဖွားလာကြတာပါပဲ။
ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်တဲ့ ကိုဒွေးကောင်းရာ သုဂတိလားပါစေဗျာ။
သေမင်းကလည်း မတရားဘူးဗျာ။ လူကောင်း၊ လူတော်တွေကိုချည်းပဲ စောစောစီးစီး ဆွဲထုတ်သွားတယ်။
7/11/2007 11:06 PM
7/12/2007 2:37 AM
7/12/2007 3:17 AM
7/12/2007 3:59 AM
ြNot enough words to express my grief for his loss....
7/12/2007 4:20 AM
ပြည်သူချစ်သော အနုပညာရှင် ကိုသားကြီး ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ...
7/12/2007 6:10 AM
It's so sad. His old pics can be viewed in this web site. http://groups.yahoo.com/group/dwefanclub/
လူတယောက်ကို စာရိတ္တနဲ့ပဲ တိုင်းတာချင်တဲ့ စိတ်က များနေလို့ဖြစ်မယ်။
then why you comment in here. you dont believe in him then don't say anything , there arealot of people who are very love him and he was of courseagood guy .
oh.. i can't believe..
i still remember the day i met and ask him to sign on my book in Yangon University on his stooting, so fast he left his fan and his beloved wife..
oh no i can't believe..
it'sagreat shock andagreat loss..
i feel sory for his Ma Moe..
7/12/2007 9:16 AM
It's true story(actor dwae)
It's really at the life.
we must belive it.
U and me, all people quickly and slowly will died,
It is really sad for you and your beloved wife.
Today I realized myself, you are my best actor. But too late.
အဲ ဘလော့နှင့် ဝေးလျှင် တစ်ရက် နောက်ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့ အတိုင်း ။ ကိုသားကြီး လျှောတာ ဒီနေ့မှ သိတာပဲ။ မလွယ်ပါလား၊ အင်တာနက်နှင့် ကွန်ပျူတာ လယ်ပင်းချိတ်ထားမှ နှင့် တူတယ်။
ကိုသားကြီးနှင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစု အတွက် ၀မ်းနည်းပါကြောင်း
Hey don't angry to this stupid lady Khin Min Zaw. She looks like our country authorised people. Always look from stupid angle. (This man not good.. that man stupid... he is very bad... only she good..)
Dear Ah Pyo Gyi,
Would you like to write about Dwe or want to post the picture?
Please kindly differentiate.....
kya naw ah htoo pall wann nall mi par tal..DWAE ka kya naw ah kyite sone minn thar par..kg yar mon yar yout par sae loh sanda pyu par tal byar..
7/12/2007 3:06 PM
hey khin min zaw , .. u shouldn't say like that .. cozalot of ppl like ko thar gyi .. if u dun like shut up ur mouth .. but i wanna ask ya .. how about ur character ?? huh .. damm stupid !!!
မေဓာဝီလည်း ဒွေးနီးပါး လူသိများပါပေတယ်။ comment တွေများတာကို ကြည့်ြ့ပီးပြောတာပါ။
hmmm.... i dont believe it....
ကိုသားကြီး ရဲ့ အနုပညာတွေမှာ (အထူးသဖြင့်) သူဆိုတဲ့ သီချင်းအေးအေးလေးတွေကို သိပ်ခံစားရပါတယ်။ အင်မတန်လည်း သဘောကျတယ်။ စောတာမစောတာထက်ကို နှမျောတာက ပိုပါတယ်။
7/12/2007 6:12 PM
Aung Tun Naing said...
I can't belive he is gone. He will live in our hearts forever.
7/13/2007 1:27 AM
I fell so sorry for Ko Tha Gyi bad news.And I'm so sorry for Ma Moe lost.He should not do that knid of bad thing.He is too young for die.He isagood talented actor .I think all of Burmese Stars are need to scare of those thing.He should not do for his dead.I want to say he is too stupid to do that bad thingi.
7/13/2007 2:36 AM
ကိုယ်က နာမည်ဖော်ပြီး ကိုယ့်အယူအဆကို တင်ပြရဲတယ်။
ကိုယ့် စာရိတ္တကို အစမ်းသပ်ခံနိုင်တယ်။
သူများကြိုက်ပေမယ့် ကိုယ်ကြိုက်ချင်မှ ကြိုက်မယ်။
သိချင်ရင် ကိုယ့်ဘလော့ကို လာကြည့်လိုက်။
လူတော်လူကောင်းပြောကြလို့ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ ကိုယ်မေးတယ်လေ။ မင်း ဖြေပေါ့။
7/13/2007 4:09 AM
i dun't believe myself..:(
7/13/2007 4:29 AM
7/13/2007 5:21 AM
7/13/2007 5:23 AM
is he really dead? or is someone replaced at his place like in the movie? according to photo, it is hard to recoznize because the skin color become charcoal color. If it is really true, I extend my deepest sampathy to his family and everybody who loves dwe.
I am wondering how eindra kyaw zin is after dwe is dead.
Khin Min Zaw & All the Chicken Anonymous,
I do back KMZ for her frank and simple expression! You guys need to be trained to beagentle man or woman. In morden and polite and democratic communities, one has rights to express one's own feeling, in good or bad sense as long as not in taboo language!
ayannn 1 nal mi par tal ko thar gyee,,,sait lae ma kg phyit mi par tal,,ko thar gyee yalt mi thar su nalt htat thu htat hmya khan sar ya par tal,,,ko thar gyee lae kg yar thu ka di larrr par say lo su tg pay par tal~~~
Hey! Khin Min Zaw,
In this world, NO ONE is perfect!
Look at yourself….are youaGOOD person??? Even though, you may beagood person but you are definitely discourteous girl. You are making such comments at the wrong time and the wrong place. Don't you have any sympathy??? Why are you WASTING YOUR TIME if you are notafan of him? I'm notaDwe's fan either but I also feel sorry for him.
I was so shocked when I heard that news...
I wanna come back to Myanmar and want to say GOODBYE to Ko Thar Gyi.
7/13/2007 4:35 PM
I didn't know that this blog isaFan Club of Dway. Is it the place to remember or salute the fallen founding fathers of Burma who were ignored nowadays, as seen on top of page? Don't be too sensitive and have big hearts and be broad minded, please.
hey khin min zaw,
Are you so free or what?What kind of person you are, you must consider first!I think you are the one stupid, idiot in the world,you know!If you are not satisfied,you can call me anytime.I'm htet htet not anynomous,ok!.my contact number is 94874413.People already passed away,you still bother about him.why we can't understand to you?Honestly speaking Dwe never fuck you or what!
Can't believe that Dway has passed away! It was suchashocking news for me. He's the actor i like most among all the burmese actors.He's such good actor!I'm so sorry to hear this news...it's too early for him.
Oh my Buddha! Calm down Htet Htet.
The writer, please do not post the taboo words of his.
To Ko Thar Gyi ( DWE ),
How can I believe that? But It's true. I can feel how Ma Moe will fell now. He is our friend, brother because we were grown up with his movies and video. All will go this way but Ko Thar Gyi you way si too soon. Can't searchawords for you Ko Thar Gyi.....Hope you rest in heaven now.
After I read this blog, I realized something that we myanmar ppls are so free OR not interesting in some kind of life imporvement, just thinking about nonsense and doing nonsense. May be.... including me :P.
myanmar pyi kyi ka poor ya te`ahte`... luu twey ka ma thi tat bu...arr yar nay yin, di min thar min tha meeakyaung pae`... pyaw chin nay tal, men are mortal te`...asan lote lo.
Well.. Anonymous.. I guess you haven't lost someone you really love or like. Wait til you lose someone you love. Then you will understand others' feelings and the reason why people mourn for loss of loved ones. We are mortal and it's normal to mourn for losses like this as mortals.
hello khin min zaw,
i think u want to make popular urself by against with others.I agree with ur comment of presenting one's idea with free and courage.But u also need to choose when and where.I think u can understand what i meant.Next thing is u should understand everyone can think and feel of something and someone freely.This is privacy.So u should admire other privacy.U can present whom u don't like but don't fight with others who are on opposite side of u.There is one thing that i can say is that this blog page is not for presenting of why we don't like him.I think that is not suitable for him and this situation.
Dwe...............I miss you already.
fuck you all.all known why Dwe die for????If you guy don't know???I goner tell you guy.because of fucking drug OK all.fuck you
7/14/2007 2:56 AM
One more thing fucking overdose Ok.
7/14/2007 3:04 AM
i would like to see more pic of his funeral, always been his no.1 fan....
7/14/2007 3:47 AM
Here is the link to see some photos of his funeral:
Hey guys be kind and civilized, haveasympathy, most of all learnabig lesson that Dway had taught!
7/14/2007 4:02 AM
Only when some one who may beastar passes away within the unbelievable time of presence in this world, it is noticed.
There are so many who passes away, struggling in the ocean of life and death,richness and poverty, under the tyrant.
But life goes on as ever, so also the River Dan.
Make ur self notice every day that it is A NATT A
7/14/2007 6:26 AM
It was really shock me when i heard the news. I can't do anything for him,but i still left with tears in my mind.
7/14/2007 7:25 AM
hey, don't mind about what is said by khin min zaw whom we don't know man or woman or ..? He or she is telling from hell. what we need to do is praying for Dwe that Dwe will be in heaven, not be with khin min zaw in hell.
kin min zaw
what are you?adeath isadeath. there is no distiction between the deaths. Aung Sun's death isadeath. Ne Win's death isadeath. A beggar's death isadeath. A month's isadeath. Budhha's death isadeath. your death will be alsoadeath. you can ask the same question to all these deaths and you will have tha answer of your question which will prouvr what you are, not who you are. know thatabad thing commit by negligence can destroy many good things which were done by good intention. don't beabeloved one to the country.
အမည်မသိတဲ့သူဆိုပြီး ဒွေးနဲပတ်သက်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် စကားလုံးများသုံးရေးနေသူထံ
လူဆိုတာ သေတာပဲ။ ဒါက သိပ်ထူးဆန်းတဲ့ ပြဿနာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သေတဲ့အခါမှာ သူဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာက အဓိကကျပါတယ်။ သူတောင်းစားကတောင်းစားတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားက နိုင်ငံရေးအလုပ်လုပ်တယ်။ ရုပ်ရှင်မင်းသားတယောက်က သရုပ်ဆောင်ကို လက်တွေ့နဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျအောင် သရုပ်ဆောင်ရတယ်။ ဒါက သူတို့ တဦးချင်းစီရဲ့ ပြဌာန်းထားတဲ့ ဘ၀ကိုအလုပ်လုပ်ရတာပါ။ ဒီလိုကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ဘ၀မှာ ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အတွက် စီးပွားရေးအရပဲဖြစ်ဖြစ်၊နိုင်ငံရေးအရပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာအရပဲဖြစ်ဖြစ် ဖောက်ပြန်ဖို့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအရ ရှာဖို့အတွက် အခွင့်အလမ်း ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ ဖောက်ပြန်ရမယ့် ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး။ လူတယောက်မှာ ကောင်းကွက်တွေရှိမယ်၊ သူ့ဆိုးကွက်တွေလည်း ရှိမယ်။ ဒါကိုလည်း လက်ခံရဲရမယ်။
လူမှုရေးအကျင့်စာရိတ္တ ဖောက်ပြန်မှုဟာ အဆိုးဝါးဆုံးကိစ္စပါပဲ။ အခွင့်အရေးရတိုင်းးလူမှုရေး ဖောက်ပြန်ကျစတမ်းဆို ဘယ်သူမှ သူတော်စင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်း အမြဲတမ်း ခြိမ်းခြောက်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်မင်းသားဆိုတဲ့ အမည်ကျော်ကြားမှုဟာ လူမှုရေးဖောက်ပြန်ဖို့အတွက် အခွင့်အလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့၊ သူ့သရုပ်ဆောင်တဲ့ သဘာဝကျမှုကို သဘောကျတဲ့ လူတွေကို ဖျော်ဖြေပေးဘို့ပါ။ ဒါကိုခုတုံးလုပ်ပြီး လုပ်ချင်ရာလုပ်ဖို့ စော်ကားဖို့မဟုတ်ဘူး။ ဒီလောက်ပါဘဲ။
ကျမကတော့ ရိုင်းရိုင်းမပြောတတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာ လူတိုင်းထိန်းသိမ်းရမဲ့ အရာပါ။ ဒါနောက်ဆုံးပြန်ကြားတာပါ။ ကျမမအားပါဘူး။ လူတွေ တန်ဖိုးထားမှု မတူဘူးဆိုတာကို သိစေချင်တာပါပဲ။
7/14/2007 3:41 PM
Please be nice to write the comment.
We are writing comment for we loved one pass away so use nice words and write down for comment.
7/14/2007 5:00 PM
Hi khin min zaw,
May I know what was your problem with Dwe? How do you know he was not good? Really interested.
Any way, Forgiveness isakey of success.
Hey very rude Anonymous(7/14/07 8:26am),
Are you dare to mention your name?
7/14/2007 6:06 PM
I salute him b/c he never act inapolicy movie. How he brave and care for country.
7/14/2007 11:01 PM
ရှင်ခြင်းနဲ့ သေခြင်းကြား ခြားနားမှုကိုရှာ
လောဘတွေ လိုချင်မှုတွေ အောင်မြင်မှုတွေ ကျော်ကြားမှုတွေ ပိုင်ချင်တာတွေ အိုအများကြီးပါ။
အခုတော့ ဘာလဲ ဘယ်မှာလဲ ဘာဖြစ်သွားသလဲ ဘာလုပ်ကြမလဲ။ နောက်တစ်ပတ်ကြာရင် နောက်တစ်လကြာရင် နောက်တစ်နှစ်ကြာရင် ဘယ်သူတွေက ဒွေးကိုလွမ်းဦးမှာလဲ ဘယ်သူတွေကို ထပ်ချစ်ကြဦးမှာလဲ ဘယ်သူတွေကကော သေဦးမှာလဲ။
7/14/2007 11:38 PM
ဦးဆုံးပြောချင်တာကတော့ ခင်မင်းဇော်ရဲ့ ပထမဆုံး ကော်မန့်ဟာ နေရာမှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။
လူတယောက်သေဆုံးသွားလို့ အားလုံးက ၀မ်းနည်းကြေကွဲနေချိန်မှာ ဒီလို negative side ကရှုကြည့် တွေးမြင် ရေးသားဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။
(ဗုဒ္ဓ၊ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူ၊ မွတ်စလင်) ဘယ်ဘာသာဝင် ဖြစ်ပါစေ လူတယောက် သေဆုံးခြင်းဟာ ၀မ်းနည်းစရာပဲ မဟုတ်ပါလား။ သေသူအတွက် ၀မ်းမနည်းချင်နေပါ သေသူကို အပြစ်တင်ရှုံ့ချတာမျိုးတော့ လုံးဝမလုပ်သင့်ဘူး ထင်ပါတယ်။
ခင်မင်းဇော်ပြောတာ မှန်ပါတယ်။ ကိုယ့်အမြင်ကိုယ် တင်ပြတာပဲ -- လွတ်လပ်စွာ တင်ပြခွင့်ရှိတောပေါ့။ သို့သော် (၁) နေရာ
(၂) အချိန်အခါ လွဲမှားနေပါတယ်။
နေရာ ဆိုတာက -- အားလုံးကြေကွဲနေကြတဲ့ ဒီဘလော့ဂ်ရဲ့ ကော်မန့်စာမျက်နှာမှာ။
အချိန်အခါ ဆိုတာက -- လူတယောက်ဘ၀ဖြစ်တည်မှု ရပ်စဲသွားတဲ့ ခုလို အချိန်အခါ။
ခင်မင်းဇော်ဟာ ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိသူဖြစ်မယ်ဆိုရင် သေဆုံးသူရဲ့ နေရာကနေ မနေချင်ရင်တောင် ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့ သူ့မိသားစု နေရာကနေ ခဏလောက် ၀င်ပြီး ရပ်တည်ကြည့်ပေးပါ။ ဘယ်လောက် ပူဆွေးသောက ရောက်နေကြရှာမလဲ။ ((ငိုမနေပါနဲ့ … ဒီလူက လူကောင်း လူတော်မှ မဟုတ်တာ -- အကျင့်စာရိတ္တ မကောင်းတဲ့သူ -- သူက လူမှုရေးဖောက်ပြန်တဲ့သူ)) ဆိုပြီး သူ့မိသားစုကို ပြောရက်သလား။ ကိုယ်ချင်းစာတရားလေးနဲ့ စဉ်းစားပေးပါ ခင်မင်းဇော်။
ဘ၀ဆိုတာ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ် တအုပ် မဟုတ်ပါဘူး။ ကြိုတင်ပြီး ဘယ်သူကမှလည်း ပြဋ္ဌာန်းလို့မရပါဘူး။ ဒီလူတယောက် နိုင်ငံရေးလုပ်ရမယ်၊ ဒီလူဟာ ဘာသာရေးလုပ်ရမယ်၊ ဒီလူကတော့ အဆိုတော်၊ ဒီလူက သရုပ်ဆောင်၊ ဒီလူက သူတောင်းစား ဖြစ်စေသတည်းဆိုပြီး ဘ၀မှာ သတ်မှတ်ချက် ပြဋ္ဌာန်းထားချက် မရှိပါ။ သူ့ကြိုးစားချက်၊ သူ့လုပ်ဆောင်ချက်၊ သူ့ရပ်တည်ချက်နဲ့သူ ဖြစ်ပေါ်လာကြတာချည်းပါ။ သူဌေးဖြစ်မယ့်ကံဇာတာ ပါလာလည်း မကြိုးစားရင် ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကို ခင်မင်းဇော် နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။
လူတယောက်မှာ အကောင်းအဆိုး ရှိတယ်ဆိုတာ ခင်မင်းဇော်သိရင် ဒီစကားမျိုး ဒီနေရာမှာ လာပြောလိမ့်မယ် မထင်မိပါဘူး။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ လူသားတိုင်းဟာ ခြောက်ပစ်ကင်း သဲလဲစင် ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ ဒီတော့ အနုပညာရှင် သရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒွေးဟာလည်း လူထဲက လူပဲမို့ ကောင်းတဲ့အခါ ကောင်းမယ်၊ ဆိုးတဲ့အခါဆိုးမယ်။ ဒါဟာ လူ့သဘာဝပဲ မဟုတ်လား။ သူဟာလူမှုရေးဖောက်ပြန်သူ တယောက် ဟုတ်သည် ဆိုပါတော့။ သူဟာ ပရိသတ်ကို စော်ကားခဲ့ပါသလား။ သူဟာ အောင်မြင်မှုကို ခုတုံးလုပ်ပြီး လုပ်ချင်ရာလုပ်ကာ ပရိသတ်ကို စော်ကားသူ မဟုတ်ပါ။ ဒီလိုစော်ကားခဲ့ရင်ရော -- သူ့အောင်မြင်မှုက တည်တံ့နိုင်မှာလား။ ပရိသတ်က ခုလို ၀မ်းနည်းကြမှာလာ။ သူဟာ သေသည်အထိ ပရိသတ်ကို ဖျော်ဖြေသွားခဲ့သူပါ။ အခုအချိန်မှာ သူသေတဲ့အတွက် သူ့အနုပညာကို နှစ်သက်မြတ်နိုးသူ လူထုက ၀မ်းနည်းနေကြတယ်။ သူဖောက်ပြန်တာကို အားလုံးက မေ့ထားနိုင်ကြတယ်။ သေသူကို ရှင်သူတွေက ခွင့်လွှတ်နိုင်ကြတယ်။ ဒါကို ခင်မင်းဇော်က သေသူကို အပြစ်တင်ရက်တာဟာ အံ့သြစရာပဲ။
သာမန်လူသားတိုင်း တသက်မှာ တခါလောက်တော့ အမှားကျူးလွန်မိကြမှာပါပဲ။ ဒါကိုငြင်းနိုင်မလား။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူတိုင်းဟာ ခင်မင်းဇော်ပြောသလို ((သူတော်စင်)) မဟုတ်လို့ပါပဲ။
သူတော်စင်ဟာ သူတော်စင် အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်။ သူတော်စင်ဟာ သရုပ်ဆောင် အလုပ်ကိုလည်း လုပ်မှာမဟုတ်ပါ။ အနုပညာသမား၊ နိုင်ငံရေးသမား အားလုံးဟာ လူတွေပဲ မှားတဲ့အခါလည်း မှားကြမှာပေါ့။ သူတို့က သူတော်စင်အလုပ် လုပ်နေတာမှ မဟုတ်တာ။ သူတို့က တရားကျင့်နေသူတွေမှ မဟုတ်တာ။ သူတို့လုပ်နေတဲ့ အလုပ်အပေါ် အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်ရင် လူတွေက လက်ခံကြမှာပဲ။ ဒီတော့ သူတော်စင်နဲ့ သူတို့ကို နှိုင်းယှဉ်လို့ မရပါဘူး။
ဒါနဲ့ -- ခင်မင်းဇော်ဘလော့ဂ်မှာ ထူးအိမ်သင်အကြောင်း နှမြောတသစွာ ရေးထားတာ ဖတ်ရတယ်။ သူဟာ လူတော်တယောက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ လူကောင်းတယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါသလား။ သူ ဘာကြောင့်သေသွားသလဲ။ ခင်မင်းဇော်လည်း သိမှာပါ။ မသေခင်ကရော---။ သို့သော် သူဘာတွေဖြစ်ဖြစ် ဘာတွေလုပ်လုပ် သူ့ကို ပရိသတ်က နှစ်သက်ကြတယ်။ လက်ခံကြတယ်။ လေးစားကြတယ်။ ဘာကိုလဲ --- သူ့ရဲ့ အနုပညာကိုပါ။ သူ့အကျင့်စာရိတ္တကို မဟုတ်ပါဘူး။
ဒွေးကို လူမှုရေးဖောက်ပြန်တယ်လို့ စွပ်စွဲတာဟာ သူများမယား ကြာခိုလို့လား။ ဒါမှမဟုတ် သားပျိုသမီးပျိုကို မတော်မတရား စော်ကားခဲ့လို့လား။ သူတို့ နီးစပ်မှုအရ စိတ်အလိုလိုက်မိပြီး နှစ်ဦးသဘောတူ ချစ်ကြိုက်ကြတာ မဟုတ်ဘူးလား။ သူ့အမှားသူ သိလို့ နောက်ပိုင်း သူဆင်ခြင်တယ်။ တလင်တမယား စနစ်ကိုပဲ ကျင့်သုံးခဲ့တာပဲ။ သူသေတဲ့အချိန်မှာ - ((ကျမကလည်း သူ့ရဲ့ မိန်းမပါပဲ)) လို့ ဘယ်သူကများ လာပြောပါသေးသလဲ။ ကဲ -- ဒွေးကို အသာထားပြီး တခြား အနုပညာသည်တွေကို နည်းနည်းလေး ပြန်ကြည့်ရအောင်။ ကျော်ဟိန်း -- မိန်းမဘယ်နှစ်ယောက်လဲ။ တရားဝင်ရော မ၀င်ရော -- မ၀င့်တ၀င်တွေရောနော်။ တွံတေးသိန်းတန် -- မိန်းမ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲ။ ဒီထက်ဝေးဝေးကြည့်မယ် -- ဇာတ်မင်းသားကြီး ဦးဖိုးစိန်။ ထားပါတော့ -- ဒီလောက်ပဲ ဥပမာ ပေးတော့မယ်။ မြန်မာပြည်မှာရော နိုင်ငံတကာမှာပါ ဒါမျိုးတွေ အများအပြားပါ။ ကဲ -- ခင်မင်းဇော် ဒီလူတွေကို မကြိုက်ဘူး။ ဒီလူတွေ လူမှုရေးဖောက်ပြန်တယ်။ စာရိတ္တ မကောင်းဘူး။ သေသွားအေးတာပဲ။ လွမ်းစရာမဟုတ်ဘူး။ ၀မ်းနည်းစရာမဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး သူတို့ အနုပညာတွေကို အသိအမှတ် မပြုတော့ဘူးလား။
ခင်မင်းဇော်အနေနဲ့ ခွဲခြားပြီး မြင်ပေးသင့်ပါတယ်။ အနုပညာသည်ကို အနုပညာရှုထောင့်ကသာ ကြည့်ပြီးဝေဖန်ပါ။ နိုင်ငံရေးသမားကို နိုင်ငံရေးရှုထောင့်သာ ကြည့်ပါ။ သူတောင်းစားကို သူတောင်းစား ရှုထောင့်ကသာ ကြည့်ပါ။ အနုပညာသည် နိုင်ငံရေးမလုပ်လို့ စိတ်တိုစရာ မလိုဘူး။ နိုင်ငံရေးသမား တောင်းမစား လို့ စိတ်တိုစရာ မဟုတ်ဘူး။ သူတောင်းစား တရားမကျင့်ရကောင်းလား ဒေါသဖြစ်စရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူ့ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ကျင်လည်ကြသူတွေကို ရှုထောင့်တခုထဲကနေ မကြည့်ပါနဲ့။ အားလုံးကို ဘာသာရေးရှုထောင့်ကနေ ကြည့်လို့ မရပါဘူး။ နိုင်ငံရေးသမားတွေ လိမ်ညာနေကြတာပဲ၊ ငါးပါးသီလ လုံသော နိုင်ငံရေးသမား ဆိုတာ ရှိပါသလား။ ခင်မင်းဇော်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို နည်းနည်း အကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာ လူတိုင်းထိန်းသိမ်း ရမှာပေါ့။ ဒါဟာ မှန်ပါတယ်။ သို့သော် ဒီနေရာမှာ လာမပြောပါနဲ့။ နေရာနဲ့ အချိန်အခါကို ကြည့်ပြီး တချို့ကိစ္စတွေက ပြောသင့် မပြောသင့် ချင့်ချိန်ရပါတယ်။ စောင့်ထိန်းသင့်ရင် စောင့်ထိန်းရပါတယ်။ ဒါဟာ လူ့ကျင့်ဝတ်ကို နားလည်သူတိုင်း သိကြပါတယ်။ တကယ်လို့ ခင်မင်းဇော် မပြောဘဲ မနေနိုင်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ အော်နေပါ။ စိတ်တိုင်းကျပေါ့။ အခုလုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ လုပ်ရပ်လား ကိုယ်တိုင်သေချာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ခင်မင်းဇော် အနေနဲ့ ကရုဏာတရားမရှိသလို မေတ္တာတရားလည်း ကင်းမဲ့ရာကျလွန်းပါတယ်။ ဒါဟာ လူကောင်းတယောက် လူတော်တယောက် လုပ်သင့်တဲ့ လုပ်ရပ်လား။ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းပါတယ် -- စာရိတ္တကောင်းပါတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ်ရည်သွေးထားပေမဲ့ ခင်မင်းဇော်ရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ အင်မတန်မှ ရှက်စရာကောင်းလှတယ်။ လူ့ကျင့်ဝတ်ကို နည်းနည်းမှ နားမလည်ဘူး။ ခင်မင်းဇော်ဟာ နားလည်မှု ကင်းမဲ့ပြီး ကိုယ်ချင်းစာတရား ခေါင်းပါးလွန်းတဲ့ လူတယောက်လို ဖြစ်နေပါတယ်။ ခင်မင်းဇော်အနေနဲ့ အမြင်ရှင်းရှင်း မြင်သင့်ပါတယ်။ နေရာတကာ စံ ဆိုတဲ့ ပေတံကြီး တကိုင်ကိုင် နဲ့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ မျက်မှန်စိမ်းကို ချွတ်ပစ် သင့်ပါပြီ။ ခင်မင်းဇော်ဟာ စာရေးနေသူတယောက် နိုင်ငံရေးလောကထဲက လူတယောက် ဖြစ်ရိုးမှန်ရင် လူသားချင်း စာနာစိတ်ကလေးတော့ ထားသင့်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
7/15/2007 3:40 AM
Dear Ko Thitsar,
I 100% agreed your comment. Thanks for your time for this mail. Khin Aye Zaw, you are really shameful person.
Dear Ko Thitsar ,
I do support your comment . Thank you so much for your comment . I hope that she will accept and stop reply . Again i do thank you so much .
Hi Ko Thitsar,
7/15/2007 9:31 AM
ဗမာပြည်မင်းသားထဲမှာ လွင်မိုး နဲ့ ဒွေး ကိုပဲ မင်းသားလို့ သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ ခုတော့ ယောက်ျားပီသ တဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုသားကြီး ဆုံးပါးသွားပြီဆိုတော့ ဗမာပြည်မှာ မင်းသားရှားသွားပြီဗျာ။ ကိုသားကြီးရေ အမျှ.. အမျှ.. အမျှ.. ကျန်ရစ်သူ မိသားစုနဲ့ ထပ်တူ.. ကျန်ရစ်သူ အနုပညာမောင်နှမများနဲ့ထပ်တူ.. ကျန်ရစ်သူ ပရိသတ်နဲ့ထပ်တူ ၀မ်းနည်းရပါကြောင်း။ ကိုသားကြီး နောင်ဖြစ်လေရာဘ၀တွေမှာ အခုဘ၀က မင်းသားဒွေးလို လူတွေကို အပြုံးချိုချိုလေးတွေ ဆက်လက် ပြုံးပြနေနိုင်ပါစေ။
Ma Maydarwii - Thank you for posting this sad news to share with Ko Thar Gyi's fans.
Ko Thitsar - Thank you so much for your great comment.
Ma Khin Min Zaw - You may have good character, but you lack courtesy, decency. You may beagood person, but you were very rude with you comment for not respecting the others who are feeling sorry for Dway. Hope you will be able to look at yourself and may be check your politeness standards.
ကျနော် အရင်ကတော့ ဒွေးကို တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း မြန်မာကား မကြည့်ဖြစ်တာနဲ့ပဲ.. သိပ်ပီး စွဲစွဲလမ်းလမ်းမရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူဆုံးသွားတာကို သိရတော့ တော်တော်လေး မယုံနိုင်ဖြစ်ရပါတယ်။ မမေရဲ့ blog ဖတ်မှပဲယုံလိုက်ရတော့တာပဲ။
13 Jul 07, 15:13
ခင်မင်းဇော်: ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲ ဆိုတာ စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲ ကြည့်ခြင်းပါ။ အန်တီက စောင့်ဖတ်ပြီး ရယ်နေတာ။ တနေ့လုံး အားနေတာနဲ့ လေ။ ဟဲဟဲ
သူက နိုင်ငံရေးသမားကိုးဗျ.. ဟားဟားဟား ။ ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့။
ခွင့်လွတ်လိုက်ကြပါဗျာ.. ကိုသားကြီးအတွက်သာ ဆုတောင်းပေးကြရအောင်
7/15/2007 8:28 PM
I would like to hear any news related with Htin Lin from R.I.T groups.
7/16/2007 8:42 AM
I Love Dway, He's not here,but he'll stay in my heart.Substitute loss for me.
I feel really sorry for Dwae. Couldn't stop thinking and reading about him. Here is the Photos of Dwae's funeral and house without him.
7/16/2007 2:49 PM
I really sad this news so suprise
7/17/2007 8:02 AM
Actually I forgot him aldy cos I was not in touch with Myanmar movie. But this days I am always in Dwe's block and miss him.
What are the evidence of overdose?
i'm not DWE's audience but i really feel so sorrow for his new. May be reborn in holy abode!
I agree with Khin min zaw. Especially the famous person should be the role model of our surrounding.Everybody accepted that he isavery telented person. Why they didn't accept that he hasabad character.May be-- all myanmar didn't want to critize the person they love. Whatever this person did,we have to accept it, like this? anyway his death is really strange. His family shoud do post mortern and announced the result to public to maintain his dignity. Now everything is very confusing.
Hello Ko Thitsar,
If you don't mind tell me how to go Khin Min Zaw blog's.
I'd like to read how she is writing.And someone know about her blog's tell me here please...
7/17/2007 7:39 PM
I think, http://khinminzaw.blogspot.com/
Dear Ko Thitsar
Dwe is my favourite actor. I always admire him. Whenever i heard his rumour, i always sad.I always angry to ko Thar gyi bec i want him to beafaithful husband. I want him to be perfect person.After reading ur comments, I gainedalot of knowledge.We should see the movie star as the movie star. According to ur comments, most of the famous person in movie surrounding are not good , esp affair with woman.It is natural because they are very close.We never get the perfect person from movie surrounding. From this time on i never choose my admire person from movie surrounding. This is just my thinking.Ko Thar Gyi, let it be me.They thought that you never beaperfect person.U r just only good at artistic field.
7/18/2007 7:14 AM
We never get the perfect person from every environment. I do not say there is no perfact person in the world. Some person is look like faithful husband but they do anything what they want outside.
For example, all ladies have different dresses. But still want to buy new dress for happy. They are also same. Just for happy.
The most important is not to bring outside problem to home. Man isaman. Nobody can control them. They will always say how much they love you and they will not go to other happy happy place…. We must need to know that 90% are lie. But all woman thought their husband will included in the rest 10%. Why lady want to get lie from husband? Try to become open minded…
Ko Thargyi is an actor, can spend money, handsome, famous, etc., sooo, don’t blame to him. He stay together with his beloved wife Ma Moe until die.. Also passed away on Ma Moe bed…
Sorry, if my opinion is wrong.
ကိုထင်လင်း ဆုံးခဲ့တာ မနေ့ ကရက်လည်ခဲ့ပါပြီ။ ချီးမွမ်း၇ရက် ကဲ့ရဲ့ ရရက်ဆိုပေမယ့် သူ့ လို ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေအတွက်ကတော့ တသသဖြစ်နေကြဦးမှာပါ။ ကိုထင်လင်းသေဆုံးမှု အပေါ်ကနေကိုယ်တို့ ကျော်ကြည့်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင် တခုခုရနိုင်ကောင်းရဲ့ ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဝင်ပြောကြည့်ဖြစ်ပါပြီ။ တိုက်ပွဲရဲ့ အစကို ကိုယ်ခြေရာကောက်ကြည့်တော့ ဒီလိုတွေ့ ရတယ်။
သေမင်းကလည်း မတရားဘူးဗျာ။ လူကောင်း၊ လူတော်တွေကိုချည်းပဲ စောစောစီးစီး ဆွဲထုတ်သွားတယ်။ (cms said)
ဆွေးနွေးငြင်းခုံပြောဆိုနေမှုတွေရဲ့ အစဟာ ဒီနှစ်ပိုဒ်ကလို့ တွေ့ မိတယ်။ သဘောတူနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒီကနေစတင်ပြီး အပြန်အလှန် ရေးကြပြောကြ တချို့ ဆဲကြတာတွေ ဖြစ်လာ တာ လိုက်ဖတ်ကြည့်ရင်း မြင်နေရပါတယ်။
နောက်ခင်မင်းဇော်ရဲ့ စာ၃စောင်စလုံးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ မင်းသားကို လူကောင်း လူတော်လို့ပြောထားတာကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။ လူမှုရေးကိုယ်ကျင့်ဖေါက်ဖျက်တာကို လုံးဝ လက်မခံနိုင်ဘူး ဆိုတာတွေ့ ရပါတယ်။သူ့ ကို(သူ့ အနုပညာကို) မကြိုက်ဘူးလို့ ပြောထားတာ တွေ့ ရပါတယ်။ မင်းသားဆုံးလို့ဝမ်းနည်းတယ်-၀မ်းသာတယ်- ဘယ်လိုမှမခံစားရဘူး ဆိုတာ တွေတော့တိုက်ရိုက်ရေးထားတာ မတွေ့ မိ မဖတ်မိပါဘူး။
ခင်မင်းဇော်ရဲ့ မင်းသားနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးရေးတဲ့ပထမဆုံးစာဟာ ဘလော့ဂါကို CMSတဦးထဲကို တိုက်ရိုက်ရေးထားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုCMSက ဘာမှပြန်ပြောတာ မတွေ့ ရပါဘူး။ အဲဒီ နောက်မှာမှ အမည်မသိ(အမည်မဖေါ်လိုသူ)တွေ ၀င်လာကြတာပါ။ ခုထိလည်း ကိုCMSဆီက သူ့ စကားလုံးနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ဘာမှပြန်ရှင်းပြထားတာ မဖတ်ရသေးပါဘူး။
တကယ်လို့ များ ကိုCMSကနေစောစောစီးစီး သူရေးခဲ့တဲ့ ရေးချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်က သူ့ အနုပညာကို ပြောချင်တာပါ။သူ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုလာခဲ့မယ် ဆိုရင် စကားလုံးသုံးစွဲမှုမမှန်ကန်တာကို နားလည်သွားကြမယ်လို့ထင်မြင်ကြည့်ရပါတယ်။
အဲဒီကနေမှ လူတယောက်သေတာကို မစာနာဘူး။ ပူဆွေးဝမ်းနည်းနေတဲ့သူ့ မိသားစုကို ကိုယ်ချင်းမစာဘူး။နောက်ဆုံးလူမဆန်ဘူးလို့ ဆိုလိုိတဲ့ အထိ ရေးသားထားတာကို ဖတ်ရပါတယ်။ သစ္စာကနေ ခင်မင်းဇော်ကို စွပ်စွဲရေးသားထားတာ ဖတ်ရတယ်။သစ္စာပြောတာ
ကိုထောက်ခံရေးသားသူတွေရဲ့စာလေးတွေလည်းနောက်ပိုင်းမှာ ဖတ်ရပါတယ်။
ကိုယ် ဒီလိုစပြောချင်ပါတယ်။ သစ္စာအမည်နဲ့ ရေးသားသူကို ကိုယ့်အမြင်ကို ပြောပြချင် တာပါ။ စာဖတ်သူတွေ သီးခံပြီးဖတ်ပေးကြပါ။
လူဟာ သူ့ ဘ၀ရဲ့ လက်ရှိကာလအထိ သူထိတွေ့ မြင်တွေ့ ဆက်ဆံဖတ်မှတ်ကြားနာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အာရုံအားလုံးမှာကပ်ငြိလာဖူးတဲ့ အခြေအနေတွေအပေါ်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက်နဲ့ တုံ့ ပြန်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်မှုနယ်ပယ်ကလည်း ကိုယ့်ဘ၀
ဖြတ်သန်းလာမှုအပေါ်က ရရှိလာခဲ့တဲ့ ကိုယ်လက်ခံထားတဲ့ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ တရားချိန်ခွင် ပေါ်ကနေ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ကြတာပါ။ ကိုယ်စဉ်းစားမိတဲ့ လူက အခြေအနေတွေ အဖြစ် အပျက်တွေအပေါ်မှာရှုမြင် တုံ့ ပြန် လက်ခံပုံသဘောသွား ဖြစ်ပါတယ်…
ဆက်ပြောပါမယ်.. လူသေဆုံးမှုနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ လူတွေရဲ့ ခံစားချက်ဖြစ်ပေါ်မှုဆိုင်ရာ အမြင်ပိုင်းပါ။ လူတယောက်ဟာ ကိုယ်နဲ့ လုံးဝမသိတဲ့ လူတယောက်သေဆုံးတာကို ကြားရရင် ၀မ်းနည်းစိတ်(၀မ်းသာစိတ်)ချက်ခြင်းမဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်…
အမေရိက က မစ္စတာ ဦးဖြူဆုံးတယ်. အာဖရိက က ဒေါ်ကပ်ပလီမကြီးဆုံးတယ် စသဖြင့် ကြားရ.ရင်…ကိုယ်တို့ ဘယ်လိုခံစားမှုဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်နိုင်ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုခံစားချက်(၀မ်းနည်းမှု ၀မ်းသာမှု)မျိုးမှ မပေါ်နိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ ကိုယ်နဲ့ မသိခဲ့ ဖူးလို့ကိုယ့်အာရုံထဲမှာ မရှိခဲ့ဖူးလို့ ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထားပါတော့ အမေရိကတို့ အာဖရိကတို့ ဝေးပါတယ်. ကိုယ့််နိုင်ငံသားတယောက်ဆုံးတယ်။ အဲဒီလူကို ကိုယ်မသိဘူး။ ကိုယ်ဘယ်လိုခံစားမလဲ။ဘယ်လိုမှမခံစားရဘူး။ အော်လူတယောက် သေတယ်ပေါ့.ဒီလောက်ဘဲ။သတင်းစာထဲက ကိုယ်မသိတဲ့နာရေးကြော်ငြာတွေဖတ်ပြီး ဘယ်လိုိခံစားရလဲ.. ဒါတောင်နာရေးကြော်ငြာမှာ အချက်အလက်တွေပါလာပြီနော်။
ကိုယ်ဒီလိုပြောမယ်.ကိုယ် လုံးဝမသိတဲ့လူတယောက်သေတယ်ဆိုတာကို ကြားပြီး ခံစားနေရပြီ ဆိုတဲ့သူဟာ စိတ်ကုဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်နေပြီလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။
ကိုယ်သိတဲ့လူတယောက်သေပြီဆိုရင်တော့ ခံစားချက်ကပါလာရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်အပေါ်
ခံစားချက်ဟာ ၀မ်းနည်းမှုတမျိုးထဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘဲ သစ္စာ…
၀မ်းနည်းတဲ့စိတ် ဒါ့အပြင် ၀မ်းသာတဲ့စိတ် နှစ်မျိုးမှာ တမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မျိုးမှာတောင်ကြားဒီကရီတွေ အမျိုးမျိုးကွာခြားနိုင်ပါတယ်.ကိုယ် ဥပမာပေးပါ့မယ်။
လူနှစ်ယောက် စစ်ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျပြီး သေတဲ့သတင်းကြားတော့ ကိုယ် အရမ်းကို ၀မ်းသာစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကို ဒုက္ခကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့လူနှစ်ယောက် သေပြီ ဆိုပြီး ၀မ်းသာတာပါ။ အဲ. လူတယောက်သေပြီ ဆိုတဲ့သတင်းကြားရတော့ ခံစားမှုက တမျိုးပါ။ ဒီလောက်ဆိုးခဲ့ ယုတ်ခဲ့တဲ့လူကြီး လူထုတရားခွင်မှာ ကြိုးစင်မတင်လိုက်ရဘဲ သေသွားလို့ မခံချိ မခံသာဖြစ်လိုက်ရတဲ့ခံစားမှုမျိူးပါ။ အဲဒီခံစားချက်မျိုးကြတော့ အရမ်းဝမ်းသာတာထက် တောင် မြင့်သွားပါတယ်။
လူတယောက် သေဆုံးတဲ့သတင်းကြားဖူးခဲ့တဲ့အရွယ်ကစပြီး ၀မ်းနည်းစိတ်နဲ့ ခံစားလာတတ် ခဲ့တာ အခုအရွယ်မှာတော့ အရမ်းကြေကွဲဝမ်းနည်း နာကျင် ခံစားနေရပါတယ်။ယူကြုံးမရလည်း ဖြစ်နေရပါတယ်။ အဲဒီလူဟာ ကိုယ် မမွေးခင်က သေဆုံးခဲ့သူပါ။တိတိကျကျဆိုရရင် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၄၀က
သေဆုံးခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။(မနက်ဖန်နှစ် ၄၀ ပြည့်ပါပြီ)
ဒီလောက်ဘဲ ၀မ်းနည်းမှု ၀မ်းသာမှုနဲ့ ဆိုင်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ကို ရှင်းပြတတ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကိုစော်ကားခဲ့သလားဆိုတော့ ပေါ်လစီကားတွေ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ရဲမူးယစ်ဇာတ်ကားနဲ့နာမည်စရလာတဲ့သူဆိုတော့ကာ… ပေါ်လစီကားဆိုတာ ဖက်ဆစ်စစ်အုပ်စုကောင်းကြောင်း ၀ါဒဖြန့် ချီသရုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့ ပြည်သူလူထုကို မှိုင်းတိုက်လိမ်ညာတဲ့ဇာတ်ကားမျိုးဖြစ်တယ် ဆိုတာ ပြောစရာလိုသေးသလား သစ္စာ။
ဒီနေရာမှာ dawngwin ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ကွန်မင့်ဝင်ရေးသွားတဲ့သူကို ကိုယ်အံ့သြမိတယ်။ သူ့ဘလော့ကို ဖတ်လိုက်တော့ ABSDF ကလို့ တော့ထင်ရတယ်။ ဒီမင်းသားပေါ်လစီကား အများကြီးရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ဘာကြောင့်မသိဘဲ ဒီလိုဝင်ရေးတယ်ဆိုတာကို အံ့သြနေတာပါ။
ကိုယ်တို့ လေးစားချစ်ခင်တဲ့ABSDFက www.absdf8888.org နာမည်နဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တခု ရှိတာ သိပါတယ်။ဒီဘလော့ကို ဘယ်သူလုပ်တာလဲ မသိပါ။
www.bbc.co.uk/burmese/ ကိုနှိပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရင် forumခေါင်းစဉ်အောက်မှာမင်းသား ဒွေးပုံကိုမြင်ရပါမယ်။သူ့ ကိုလွမ်းဆွတ်သတိယကြသူတွေရဲ့ စကားတွေကို အသံဖိုင်ပုံတွေကို တခုခြင်းနှိပ်ပြီး နားထောင်နိုင်ပါတယ်။အဲဒီအထဲက အောက်နားမှာ မင်းသားစိုးသူရဲ့ စကားကို သွားနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါလို့ ဘဲ လက်တို့ လိုက်ပါရစေ။ နိုင်ငံတော်ဇာတ်ကားဆိုတာ ပေါ်လစီကားကိုပြောတယ်ဆိုတာကျနော်ရှင်းပြစရာ မလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်။
မင်းသားဟာ ပေါ်လစီကားအများဆုံးရိုက်ခဲ့တယ်လို့ တောင် ကိုယ်ထင်နေတယ်။မြန်မာ့ရုပ်မြင် သံကြားနဲ့ မနီးစပ်တော့ ဘယ်နှစ်ခုနှစ် ဘယ်လိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေမျိုးမှာ ဘာကားတွေ ရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ ကိုယ်တိတိကျကျမသိဘူး။ ကိုယ်ပြောတာမှန် မမှန်စာဖတ်သူတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူတွေသိနိုင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ကိုယ်တို့ အမြဲလေးစားနေရတဲ့ မောင်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အချက်အလက်ကိုသေသေ ချာချာလေ့လာဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်လို့ ဘဲ အကြံပြုပါရစေ။
လူတွေက အနုပညာကိုလေးစားကြတယ် အကျင့််စာရိတ္တကို မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဘာကြောင့် အဆိုတော်ကိုခင်မောင်တိုး သီချင်းခွေတွေ ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတာလဲဖြေပါအုံး။ ဒါတောင် ကိုယ်တို့ တလျှောက်လုံးလေးစားခဲ့တဲ့ အခုလည်းလေးစားဆဲဖြစ်တဲ့ကိုခင်မောင်တိုး နအဖညီလာခံအတွက်သီချင်းတပုဒ်ဆိုပေးရတာတခုထဲနဲ့ သူ့ ကိုဒီလိုသဘောထားကြတာလဲ။ တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဘူး။ဒီတခုကလွဲပြီး မရှိခဲ့တဲ့သူ-- ဒါတောင်ဂျပန်ပွဲတုန်းက ဒီဖက်ကို ဖျော်ဖြေပေးခဲ့လို့(ဝေးခဲ့ပြီပန်းခရမ်းပြာ သီချင်းအပါအ၀င်သီဆိုပေးခဲ့လို)့ပြန်ပြီးအကျပ်ကိုင်ခံ ခဲ့ရတာပါ။(ပြည်သူကို ရာသက်ပန်ကျွန်ပြုမယ့်ဖွဲ့ စည်းပုံ နောက်ဆုံးပိုင်းရောက်နေပြီလို့ဦးသိန်းစိန်ပြောနေပြီ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးကလည်း အရေးကြီးနေပြီ ကြော်ငြာဝင်တာပါ)
မိန်းမသားတွေရဲ့ အားလုံးသိတဲ့စိတ်ကို ပြောပြမယ်။ သ၀န်တိုတတ်တယ်။မုံ့ သာဝေစား မယ် အချစ်ကိုဘယ်တော့မှ ဝေမစားနိုင်တာ မိန်းမတိုင်းရဲ့ အညှာပါ။ုသစ္စာ မမိုးမိုးဖက်က နေပြီး မစာနာပေးတော့ဘူးလား။
ဗမာ့ယဉ်ကျေးမှုမှာ တလင်တမယားစံနစ်ဆိုတာ လင်ရော မယားရောနှစ်ယောက်စလုံးဟာ ကိုယ်လင် ကိုယ်မယားကလွဲပြီး ဘယ်သူတဦးတယောက်နဲ့ မှ(နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူလို့ ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်) မသွားလာရဘူးဆိုတာ သစ္စာ ဘာကြောင့်မသိတာလဲ။
တချို့ အချက်အလက်တွေက မပြောမဖြစ်လို့ တည့်တည့်ပြောရတော့မယ်။မင်းသားဟာ ကလေးမွေးပေးနိုင်တဲ့အရည်အချင်းမရှိဘူးလို့ ကြားဖူးတယ်။ သူနဲ့ ဆက်ဆံနေတဲ့ သူဖုန်းဆက် ရင်ချက်ခြင်းလာတဲ့ အဆိုတော်မ မော်ဒယ် မင်းသမီး တွေ၃ ၄ဦးရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ဒါကို အားလုံးကမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောနိုင်ပါတယ်။ကာယကံရှင်တွေသာ သိမဲ့အခြေအနေမျိူးပါ။
စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ ကိုယ်ကလည်း အားနည်းသေးတယ် ကိုယ်ကလည်းဖေါက်ပြန်သေးတယ် ဆိုတော့ တရားရဲ့ လားဗျာ။ အဲဒါတွေက အိမ်ထောင်ရှင်ဖြစ်ကထဲက နောက်ဆုံးချိန်အထိဆက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေ အနေလို့ ကြားသိရပါတယ်။ အဲဒီအချက်အလက်မှားနေပါစေလို့ …….
ကိုယ်ပြောမယ်-ဒီအပိုင်းဟာ အဓိက ပြောချင်တဲ့အပိုင်းပါ။ လူတွေကို သူ့ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်ရှုထောင့်ကသာ ဝေဖန်ဖို့ ပြောထား ပါတယ်။ ကောင်းပြီ.. အဲဒီလူဟာမည်သူမဆို သူ့ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ထဲမှာပဲနေရင်တော့ ပြောဖို့ ဘာမှ မလိုဘူးဆိုတာ မှန်ကောင်းမှန်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီလူဟာမည်သူမဆို နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်နဲ့ ဆက်စပ်လာပြီဆိုရင်တော့ ပြောကိုပြောရတော့ မှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးစံနဲ့ တိုင်းကို တိုင်းရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြောနည်းနှစ်မျိူးရှိပါတယ်..အကောင်းပြောမှာလား အဆိုးပြောမှာလား။
ကိုယ်ဆွေးနွေးမယ့်အပိုင်းကို သစ္စာနားလည်စပြုလာပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ကိုယ်တို့ နိုင်ငံလိုအခြေအနေမျိုးဟာ ဘယ်သူမှ(ဘယ်သူမှ)ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လွတ် လွတ်လပ်လပ်လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုး နိုင်ငံရေးရာသီဥတုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သစ္စာ လက်ခံမယ်ထင်ပါတယ်.ကောင်းပြီ ဆက်ရအောင်။
အနုပညာရှင်အပိုင်းတခုထဲကိုဘဲ ကြည့်ကြရအောင်။ စာပေ ရုပ်ရှင် ဂီတ ဒီ၃ခုကိုဘဲ ကြည့််
ကြမယ်။ ဘယ်အနုပညာရှင်ဟာ ကိုယ့်အနုပညာအလုပ်တခုထဲကိုဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်နေနိုင်တဲ့သူရှိသလဲ ကြည့်ကြည့်ပါ။
သစ္စာ သိခဲ့ကြားခဲ့ဖူးတဲ့ အနုပညာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့နိုင်ငံ ရေးနဲ့ ဆက်စပ်ခဲ့မှု တွေ ကိုမြင်ကြည့်လိုက်ပါ။အချိန်ကာလ ဝေးဝေးမကြည့်ပါနဲ့ .၁၉၈၈ခုနှစ်ကနေ ဒီကနေ့ အထိ ပြန်တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ အများကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ကောင်းပြီ - အဲဒီလိုနိုင်ငံရေးနဲ့ ဆက်စပ်ပါတ်သက်ခဲ့သူ အနုပညာရှင်တွေကို သစ္စာဘာစံ ဘာပေတံနဲ့ တိုင်းပါသလဲ.. စာဖတ်သူများကရောဘာပေတံနဲ့ တိုင်းကြပါသလဲ။ ဗမာပြည်သူလူထုကြီးကရော ဘာပေတံနဲ့ တိုင်းနေသလဲ။ ကိုယ်အရမ်းကို သိချင်ပါတယ်။
ကိုယ်ပြောမယ်.. လက်ရှိဗမာပြည် နိုင်ငံရေးမှာ ဘက်နှစ်ဘက်ဘဲရှိတယ်။
ဖက်ဆစ်စစ်အုပ်စုထောက်ခံတဲ့ဖက်နဲ့ဖက်ဆစ်စစ်အုပ်စုဆန့် ကျင်တဲ့ဖက်။ ဒီနှစ်ဖက်မှာ ကြား (ဂျား)မရှိဘူး သစ္စာ။ တချိန်ပြည်သူတွေက ပွင့်လင်းလွတ်လပ်စွာ သမိုင်းတင်နိုင်တဲ့ခေတ်ကို ရောက်လာခဲ့ရင် ဘယ်သူတွေကဘယ်လိုရပ်တည်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ပြောကြလိမ့်မယ်။ရေးကြ လိမ့်မယ်။အဲဒီအချိန်ရောက်ခဲ့ရင် အမှန်တရားတွေအားလုံးပေါ်လာတော့မယ်။ ဒီတိုင်းတာချက် စံဟာ ဒီမိုကရေစီခေတ်ရဲ့ထာဝရတည်တံ့နေတော့မယ့်မှတ်ကျောက်ဖြစ်သွားတော့မယ်။
ဒီကနေ့ ကာလ အနစ်နာခံတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ ရသလောက်ထဲက လူမှုရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ် လုပ်နေတဲ့အနုပညာရှင်တွေဟာ တချိန်ခေတ်ကောင်းရောက်ခဲ့ရင် အများရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှု ကိုခံယူရမှာ သေချာလှပါတယ်…အဲဒီလိုကျင့်ကြံနေတဲ့အနုပညာရှင်တွေဟာ နအဖစစ်အုပ်စု ရဲ့ ဖိနှိပ်မှု ထမင်းအိုးရိုက်ခွဲမှုကို ကောင်းကောင်းခံပြီး အများပြည်သူအတွက်လုပ်နေတာ အားလုံး မြင်နိုင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုအနုပညာရှင်မျိုးကို ကိုယ်သိပ်ပြီးလေးစားတယ်။။
မင်းသားရဲ့ ကိုယ်ကျင့်ကနေ သူ့ ဘ၀မကွယ်လွန်မီအထိ ဘယ်လိုလူ့ လောကအကျိုးပြုလုပ် ငန်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကြည့်ချင်တယ်။ မိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက် အဖြူရောင်သက်တန့်လှုပ်ရှားမှုထဲက အနုပညာရှင် ၈၀ ဦးထဲမှာသူပါတာ မဖတ်မိဘူး။တကယ်လို့ အများအကျိုးပြု လုပ်ငန်းတွေလုပ်ခဲ့တာ သိတဲ့သူတွေပြောပေးစေချင်တယ်။ကိုယ်လေးစားမိမှာပါ။
တတိုင်းတပြည်လုံးဆင်းရဲငတ်ပြတ်နေတာကို တွေ့ မြင်ကြားသိနေတဲ့ ပြည်သူထဲက ပြည်သူ့အနုပညာရှင်တွေဟာ စစ်အုပ်စုရဲ့ ဖြစ်စားလာဘ်စားမှုတွေကို ရှောင်ပြီးတိုက်ရိုက်ထိရောက်တဲ့ ကူညီလှူဒါန်းမှုလုပ်နေတာတွေ စေတနာတွေကို မြင်နေကြားနေရလို့ကိုယ်တို့ သိပ်ပြီး ပီတိဖြစ်ရတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ မင်းသားကို ပါစေချင်ပါတယ်။ ပါခဲ့ပါစေလို့ ဘဲ…..
ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ပြဿနာ နှစ်ရပ်(သို့ )မပြီးသေးတဲ့ပန်းချီကား
၁။ မင်းသားရဲ့ ဦးလေး မင်းသားကြီးဦးကျော်ဟာ မင်းသားအတွက်ပို့ တဲ့လွမ်းသူ့ ပန်းချင်းမှာ ဒီလိုရေးခဲ့တယ်။ ဟေ့ကောင်သားကြီး ငါမွေးခဲ့တဲ့မင်းကို သေအောင်သတ်လိုက်တာ ဘယ်သူ လဲ တဲ့။
ဒါဘယ်သူ့ ကိုရည်ရွယ်ထားတာလဲ။ဒါဟာနောက်ဆက်တွဲစိတ်မကောင်းစရာတွေအတွက် ဖေါ်ကွက်လား။(မင်းသားအိမ်မှာ မိသားစု သရဏဂုံတင်တော့ မင်းသားကြီးမပါခဲ့ဘူး။ ရေဝေး မှာလည်း မင်းသားကြီးကို မတွေ့ မိ။ ကိုယ်မင်းသား ဈာပနအခွေကြည့်ပြီးပြီ)
၂။ ဒါကတော့တော်တော်ကြီးတဲ့ကိစ္စ.. သူ့ အရိုးအိုးကို ချောင်းဝဆရာတော်ဦးစီးပြီး စေတီ တယ်မယ်တဲ့။ အင်း…………………………….
ကိုသစ္စာကို သစ္စာလို့ သုံးနုန်းတာ တခြားကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူး။ ဒီမှာဝင်ရေးသူတွေဟာ အမျိုးသားဖြစ်လည်း ကိုထဲ့ဘို့ မလိုတာ မထည့်တာတွေ့ ရတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ထင်တာက ကိုသစ္စာဟာ အမျိုးသမီးများဖြစ်နေမလားလို့ ။ အမျိုးသမီးတောင် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်းလုပ်ခဲ့တဲ့ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့သူတယောက် နာမည်ဝှက်နဲ့ ရေးတာလို့ကိုယ်ခန့် မှန်းတယ်။
ဟုတ် တယ် ဟုတ်………………….့
7/18/2007 5:09 PM
When i read fighting letter of one another about Ko Thar Kyi, i listen ' At ta tha marr Kywan daw' song of oxygen group again and again, and try to realize what human' nature is. i regard it that this isagood example given to me by Ko Thar Kyi.
May u be free from suffering like this!
Hi Ko Maung Gyi from Village,
Is this your real name? Why didn't you disclose your real name?
After I read your msg I feel that you are the real political person. Your msg includesalot of political words and I can guess the reason why you wrote that msg. Your main intention is to disclose Dwe's bad behaviour to everybody. But I belive his fan forgave him and also they will always forgive him forever. During i was reading ko thit sar msg, I feel that his pros and cons are more realistic than you. I don't know you and also ko thit sar. I am not also Dwe's fan. Ko Soe Thu is the only one my favourite actor in my life. Any way I thank to you for your info about Ko Soe Thu. I will check it out soon. If you want to disclose about KST bad things, I don't care. He is the only one actor in my life forever. I appraise ma moe she really love Dwe that's why she forgives him. Any way Dwe wasalucky person coz he gotawife who really admire/love to him.
After I read your msg, I feel that you may be the real political person coz your msg incldesalot of political words. I can guess your main reason why you wrote that msg. The main purpose of your msg is to disclose about Dwe's bad behaviour to everybody. Nothing can drag Dwe from his fans' heart. I think Ko thit sar's msg is more realistic than yours. His pros and cons is more acceptable. I don't know who you are and also ko thit sar. I am not also Dwe's fan. Ko Soe Thu is the only one favourite actor in my life. I really thank to you for your info about Ko Soe Thu coz I've already checked the website that you mentioned.
If you want to disclose about KST bad things, I don't care at all. My mind will not be changed forever. I believe Dwe's fan will also like me.
I appraise ma moe. I notice that from your msg she really love Dwe very much that's why she forgives him. Any way Dwe wasalucky man he gotawife who really love to him.
ပထမဆုံး ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင် မမေဓာဝီကို ဒီကော်မန့်တွေအတွက် တောင်းပန်လိုပါတယ်။
ကျွန်တော့် ရေးသားချက်ကို ခင်မင်းဇော် ကိုယ်တိုင်ပြန်ရေးလိမ့်မယ်
ထင်နေခဲ့တာပါ။ ခင်မင်းဇော်က လက်ရှောင်ပြီး တောကမောင်ကြီးဆိုသူက
ပြန်ရေးပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်တိုင်သာ ပြန်ရေးပါမယ်။
(၁) ကိုစီအမ်အက်စ်ပြောတဲ့ လူကောင်းလူတော်ဆိုတဲ့ အသုံးကို ခင်မင်းဇော်က သဘောမကျဘူး။
(၂) လူတယောက်ကို စာရိတ္တနဲ့ပဲ တိုင်းတာချင်စိတ် ခင်မင်းဇော်မှာရှိတယ်။
(၃) လူမှုရေးဖောက်ပြန်တယ်၊ အနုပညာကို ခုတုံးလုပ်ပြီး လုပ်ချင်ရာလုပ်
စော်ကားတာဟာ မကောင်းဘူးဆိုပြီး ဒွေးကို ရည်ညွှန်းလို့ ခင်မင်းဇော်က
(၄) ခင်မင်းဇော်နဲ့ အမြင်မတူသူတွေ (ကျွန်တော်အပါအ၀င်) ကော်မန့်ရေးကြတယ်။
(၅) ကျွန်တော်ကော်မန့်ထဲက အဓိကအချက်က ခင်မင်းဇော်ဟာ ဒီကော်မန့်ရေးတာ နေရာ
နဲ့ အချိန်အခါ လွဲနေတယ်၊ ကိုယ်ချင်းစာတရား မရှိရာကျနေတယ် ဆိုတာပါပဲ။
(၆) ဒီတော့ တောကမောင်ကြီးက ကျွန်တော့်ကို ဦးတည်ပြီး ရှည်လျားစွာ ကော်မန့်ရေးတယ်။
ဒါတွေကိုဖတ်ပြီး လွဲချော်ချက်တွေ ထပ်တွေ့တယ်။
လွဲချော်ချက် - ၁။
((ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာ လူတိုင်းထိန်းသိမ်းရမဲ့ အရာပါ။
ဒါနောက်ဆုံးပြန်ကြားတာပါ။ ကျမမအားပါဘူး။)) ဒါ ခင်မင်းဇော်ပြောခဲ့တာပါ။
ကောင်းဘွိုင်ရဲ့ ကော်မန့်မှာတော့ ခုလိုတွေ့ရတယ်။
((13 Jul 07, 15:13
ခင်မင်းဇော်: ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲ ဆိုတာ စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲ ကြည့်ခြင်းပါ။
အန်တီက စောင့်ဖတ်ပြီး ရယ်နေတာ။ တနေ့လုံး အားနေတာနဲ့ လေ။ ဟဲဟဲ))
လွဲချော်ချက် - ၂။
((လူတယောက်သေဆုံးသွားလို့ အားလုံးက ၀မ်းနည်းကြေကွဲနေချိန်မှာ ဒီလို
negative side ကရှုကြည့် တွေးမြင် ရေးသားဖို့ မသင့်တော်ဘူးဆိုတာပါပဲ။
ခင်မင်းဇော်ဟာ ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိသူဖြစ်မယ်ဆိုရင် သေဆုံးသူရဲ့ နေရာကနေ
မနေချင်ရင်တောင် ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့ သူ့မိသားစု နေရာကနေ ခဏလောက် ၀င်ပြီး
ဒွေးသေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်ချင်းစာတရားကို အခြေခံလို့
ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပါ။ ဒါကို ပြန်ရေးတဲ့သူက
((ကိုယ် လုံးဝမသိတဲ့လူတယောက်သေတယ်ဆိုတာကို ကြားပြီး ခံစားနေရပြီ
ဆိုတဲ့သူဟာ စိတ်ကု ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်နေပြီလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။))
အခုဟာက ကိုယ်လုံးဝ မသိတဲ့လူတယောက်အကြောင်း ပြောနေတာလား။
ကိုယ်မသိစေဦးတော့ တစုံတယောက်ရဲ့ သေဆုံးခြင်းဟာ ကိုယ့်အတွက်
၀မ်းသာစရာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ခံစားချက် ကင်းမဲ့ချင် ကင်းမဲ့မယ်။ ဒါပေမဲ့ …
သူ့မိသားစုနေရာကနေ ကိုယ်ချင်းစာဖို့သာ ကျွန်တော် ရေးခြင်းဖြစ်တယ်။
လွဲချော်ချက် - ၃။
တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးသူ တဦးဦး သေတာနဲ့ ဒွေးသေတာ နှိုင်းယှဉ်ပြရန် လုံးဝ
အကြောင်းမရှိပါ။ ဒါဟာ သက်သက် ကိုယ်လိုရာကို ဆွဲပြောနေသလိုပါပဲ။
လွဲချော်ချက် - ၄။
((လူတယောက် သေဆုံးတဲ့သတင်းကြားဖူးခဲ့တဲ့အရွယ်ကစပြီး ၀မ်းနည်းစိတ်နဲ
့ခံစားလာတတ် ခဲ့တာ အခုအရွယ်မှာတော့ အရမ်းကြေကွဲဝမ်းနည်း နာကျင်
ခံစားနေရပါတယ်။ယူကြုံးမရလည်း ဖြစ်နေရပါတယ်။ အဲဒီလူဟာ ကိုယ် မမွေးခင်က
သေဆုံးခဲ့သူပါ။တိတိကျကျဆိုရရင် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၄၀က
သေဆုံးခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။(မနက်ဖန်နှစ် ၄၀ ပြည့်ပါပြီ) ))
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၄၀ (၁၉၆၇-ခုနှစ်) ဇူလိုင် ၁၉ တုန်းက
ဘယ်သူသေဆုံးသွားခဲ့ပါသလဲ။ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ အပေါင်းပါ အာဇာနည်ကြီးများ
သေဆုံးတာက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၆၀ (၁၉၄၇-ခုနှစ်) ကဖြစ်ပါတယ်။
လွဲချော်ချက် - ၅။
ပေါ်လစီဇာတ်ကားရိုက်ကူးသော အနုပညာသည်တိုင်း ပရိသတ်ကိုစော်ကားသူများ
ဖြစ်ပါသလား။ ဒီမြေမှာနေပြီး ဒီအစိုးရရဲ့ လက်ခုပ်ထဲမှာ နေထိုင်ကျင်လည်ရတဲ့
အနုပညာသည် (သို့မဟုတ်) ၀န်ထမ်းတိုင်း အစိုးရရဲ့ by force နဲ့
ခိုင်းတာတွေကို တကြိမ်တခါတော့ မလွှဲမရှောင်သာ လုပ်ကြရပါတယ်။ လုံးဝ
မလုပ်ခဲ့ဖူးသူ တယောက်တလေကို အတင်းဆွဲ မပြပါနဲ့။ အနုပညာသမားတွေဟာ
ပရိသတ်နဲ့ အစိုးရကြား လိုက်လျောညီထွေစွာ နေထိုင်ရတဲ့သူတွေပါ။ ခေတ်အဆက်ဆက်
အနုပညာသမားတွေဟာ အစိုးရ (၀ါ) နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ အသုံးချခံခဲ့ရပါတယ်။
ဥပမာ- လူထုအောင်သံ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေး
ဇာတ်ကားတကားပဲ။ ဒီဇာတ်ကားထဲ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သူအားလုံး ကွန်မြူနစ်ကို
စိတ်ပါလက်ပါ ဆန့်ကျင်သူတွေချည်းပဲလား။ အတင်း ခေါ်ခိုင်းလို့ လုပ်ကြရတဲ့
လွဲချော်ချက် - ၆။
((လူတွေက အနုပညာကိုလေးစားကြတယ် အကျင့််စာရိတ္တကို မဟုတ်ဘူးဆိုရင်
ဘာကြောင့် အဆိုတော်ကိုခင်မောင်တိုး သီချင်းခွေတွေ
ဒီနေရာမှာ ခင်မောင်တိုးရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တကြောင့် ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတာလား။ by
force နဲ့ ခိုင်းတာကို မလွဲမရှောင်သာ လုပ်ပေးရတာ။ အထက်မှာပြောပြီးပါပြီ။
ပရိသတ်နဲ့ အစိုးရကြားမှာ အနုပညာသည်တွေအနေခက်လှပါတယ်။
လွဲချော်ချက် - ၇။
((ဗမာ့ယဉ်ကျေးမှုမှာ တလင်တမယားစံနစ်ဆိုတာ လင်ရော မယားရောနှစ်ယောက်စလုံးဟာ
ကိုယ်လင် ကိုယ်မယားကလွဲပြီး ဘယ်သူတဦးတယောက်နဲ
့မှ(နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူလို့ ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်) မသွားလာရဘူးဆိုတာ သစ္စာ
ဗမာ့ယဉ်ကျေးမှုလား၊ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာလား။
ဗမာ့ယဉ်ကျေးမှုမှာတော့ မင်းတုန်းမင်း၊ သီပေါမင်းတို့ မိန်းမတွေအများကြီး။
ဟိုးနောက်ဘက်ပြန်ကြည့်။ အနော်ရထာ၊ ကျန်စစ်သား ဗမာစစ်စစ်ကြီးတွေ တလင်တမယား
စနစ်နဲ့ နေကြရဲ့လား။ ဘာသာရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို မရောထွေးစေလိုပါ။
လွဲချော်ချက် - ၈။
ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးရေးသားနေကြတာ ဘာသာရေးမဟုတ်သလို၊ နိုင်ငံရေးလဲ
မဟုတ်ပါဘူး။ အနုပညာသည် တယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒွေး သေတဲ့ပေါ်မှာ ထားရှိကြတဲ့
ဒါကို နိုင်ငံရေးသမကြီး ခင်မင်းဇော်က စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲပစ်တယ်။
နောက် ခင်မင်းဇော်ရဲ့ ရှေ့နေဖြစ်ဟန်တူသူ (နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းကပဲ
ထင်ပါရဲ့) တောကမောင်ကြီးအမည်ခံက ခုလို နိုင်ငံရေးသဘောတရားတွေနဲ့ ရှည်လျားစွာ
ရှင်းပြတယ်။ ဒါကြောင့် တော်တော်လေးကို လွဲနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
သူဟာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တယောက်။ သူလုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို လုပ်တယ်။
ပရိသတ်လက်ခံတယ်။ သူသေတော့ နှမြောကြ ၀မ်းနည်းကြတယ်။ သူဟာ
သူတော်စင်မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဖောက်ပြန်ကောင်း ဖောက်ပြန်ခဲ့မယ်။ လူတွေ
(အများစု) က ဒီအချိန်မှာ ဒါကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးမနေဘူး။ သူဟာ
ဆေးကြောင့်သေသေ ဘာကြောင့်သေသေ သူသေလို့ အများစု ၀မ်းနည်းနေချိန်မှာ
စာရိတ္တတွေ ၀ါရိတ္တတွေ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ ဒီနေရာမှာ လာပြောတာ
နိုင်ငံရေးသမားတွေပီပီ နိုင်ငံရေးအမြင် နိုင်ငံရေးအတွေးတွေနဲ့ ချည်း
မတွေးကြပါနဲ့လား။ လူမှုရေးဆိုတဲ့ အတွေးအမြင်ကလဲ တွေးကြည့်ပေးကြပါ။ လောကမှာ
ပုံသေနည်းချပြလို့ မမှန်တဲ့အရာတွေ တပုံကြီးပဲ။
နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ အဲဒီလို သူတပါးအပြစ်ကို လိုက်လံတွေးမြင် ရှုကြည့်ပြီး
လွဲချော်ချက် - ၉။
((ကောင်းပြီ - အဲဒီလိုနိုင်ငံရေးနဲ့ ဆက်စပ်ပါတ်သက်ခဲ့သူ အနုပညာရှင်တွေကို
သစ္စာဘာစံ ဘာပေတံနဲ့ တိုင်းပါသလဲ.. စာဖတ်သူများကရောဘာပေတံနဲ
့တိုင်းကြပါသလဲ။ ဗမာပြည်သူလူထုကြီးကရော ဘာပေတံနဲ့ တိုင်းနေသလဲ။
ကိုယ်အရမ်းကို သိချင်ပါတယ်။ ))
အနုပညာသည်တွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် ပရိသတ်က ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ တဦးတယောက်
အဖွဲ့အစည်းတခုခု က ဆုံးဖြတ်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူး။ သူလုပ်တာမှားရင် ပရိသတ်က
ဒဏ်ခတ်လိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် တဦးတယောက် ထဲက စံတွေ ပေတံတွေနဲ့
တိုင်းပိုင်ခွင့်လည်း မရှိဘူး။ အများသဘောအရပဲ။ အများဆန္ဒအရပဲ။
ပရိသတ်အများစုက အနုပညာသည်ကို ချစ်သလား မချစ်ဘူးလား။ လက်ခံသလား
လက်မခံဘူးလားဆိုတာ သူသေတဲ့အခါ အရှင်းကြီးပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတာပါပဲ။
လွဲချော်ချက် - ၁၀ ။
((ဒီမှာဝင်ရေးသူတွေဟာ အမျိုးသားဖြစ်လည်း ကိုထဲ့ဘို့ မလိုတာ မထည့်တာတွေ
့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ထင်တာက ကိုသစ္စာဟာ အမျိုးသမီးများဖြစ်နေမလားလို့ ။
အမျိုးသမီးတောင် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်းလုပ်ခဲ့တဲ့
လက်ရှိလုပ်နေတဲ့သူတယောက် နာမည်ဝှက်နဲ့ ရေးတာလို့ကိုယ်ခန့် မှန်းတယ်။
ဟုတ် တယ် ဟုတ်………………….့ ))
အပေါ်မှာ ဘလော့ဂါ ကိုCMS တဲ့။ အမျိုးသားဖြစ်လည်း (ကို)
ထည့်ဖို့မလိုဘူးဆိုပြီး စီအမ်အက်စ်ကို (ကို) တပ်ခေါ်ထားတာတွေ့ရတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အပြင်လောကမှာ မင်းသားမင်းသမီး အဆိုတော် ကို/ဦး/ဒေါ်/ မ
ထည့်ဖို့ မလိုအပ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရေးသူဟာ ကိုထင်လင်းလို့ သုံးထားတယ်။
ကျွန်တော်တို့အားလုံးက ဒွေးပဲသုံးပါတယ်။ ခင်မောင်တိုး ကိုလည်း
ခင်မောင်တိုးပဲ။ ကျော်ဟိန်းဆိုလည်း ကျော်ဟိန်းပဲ။ တွံတေးသိန်းတန်လည်း
ဦးတွံတေးသိန်းတန် သို့မဟုတ် တွံတေး ဦးသိန်းတန်လို့ မသုံးချင်ပါဘူး။
သုံးလည်း မသုံး ပါဘူး။
အထက်ပါစာကိုရေးသူ တောကမောင်ကြီးအနေနဲ့ သစ္စာကို (ကို) တပ်သည်ဖြစ်စေ မတပ်သည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ သစ္စာကို ငသစ္စာခေါ်လည်း (သစ္စာ)ဆိုတဲ့ (အမှန်တရား)က ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပါ။ ကျား/မ
လိင်ခွဲခြားတာလဲ မိမိသဘောကျ ခွဲခြားထင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ
ဆွေးနွေးချက်ထဲ အရေးတယူ ထည့်ရေးရန် ကိစ္စ မဟုတ်ပါ။
သို့သော် … ကျွန်တော်ဟာ မည်သည့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းမှာမှ လုပ်ခဲ့ခြင်း၊
လုပ်နေခြင်း အလျဉ်းမရှိပါဘူး။ ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်ဟာ နိုင်ငံရေးသမား
တယောက် (လုံးဝ) မဟုတ်ပါ။ လူတယောက်သာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
(လွဲနေတာတွေ ရှိသေးတယ်။ ရှည်နေပြီမို့ ဒီလောက်ပဲ)
This is very good reply.
I don't know how to write as you.
Regarding your2long letters, my feeling is totally same as you.
Thanks Thitsar. Really appreciate.
Hi! Ko Thitsar,
Totally correct what you say all this things. khin Min zaw, better stop & shut up your mouth right now. Don't come & mix up politics here. Are u so free and talk suchawrong comment. Like that call Political man.
Remind again Khin Min Zaw & the person who support her.
7/20/2007 2:15 AM
Dear, Ko Thitsar,
Thank you so much for your excellent explanation. I really appreciate it.
I think the follwing mail was wrote by same person. Try to check previous all comments and times. If I worng, sorry.
7/16/2007 1:58 AM
Pls don't write about politics here. This blog is not for politics...What that blog is for ????? Pls read back ma maydarwi's desire...I am totally agree with Ko Thit Sar.
Very interesting to read this page. New Myanmar fighting movie!!!!
Actor--Thitsar and actress Khin Min Zaw
Hope that lon Htar Htar or Mg myo min (made in heart)will not see this page.Other wise they can get the new story.Ha ha
Hi Ko Thit Sar,
Yesterday I read the msg from Ko Maung from village, I didn't notice that there arealot of mistakes. Very good reply. Mostly I agree with you.
Hi Ma Khin Min Zaw,
I am waithing your replied msg directly to point out the Ko Thit Sar's mistakes or weaknesses.
So that we can give impartial view on both of you. But I can say KTS is more polite than you.
He may not beapolitical man. ( May be I am wrong coz I don't know him. Just give comment base on his msg.)
I don't want to read other's reply.
But your msg must be more reasonable than KTS.
I am not so free but very interested in this blog. Nowsaday I read this blog everyday. Learn from other people mistakes.
Even ur name is ko this sar, ur sound seemed to be--- u don't understand the word 'faitful and loyalty. U said that every movie star or artist can do everything they like if the audience accept their art. This idea is bascially wrong.
After reading all 126 comments, i realized that all are sad and surprise . After that u talk about morality and good character. Khin Min Zaw asked whether he isaintelligent and good one? This is the point. Eveybody knows that he may has the very bad things in one case, So his fan try to cover this one and accused Khin Min Zaw.
But one commet said that why sai sai Khan Hlaing and Ye lay did not die? My dear Ko Thit sar, do u think that this kind of wish is fair for those two kids.But this is justacomments. so he or she write the any idea they have. SO it doesn't matter to be sensitive.
We can say our comments freely. If we go to in funeral in dway house this time, we should avoid to tell the bad things.Now we r outside of his family. We can talk our idea freely.
we can accept the DWe bec he is good at acting. we can dislike the Dwe bec he has some bad things. No need to choose the right time to mention to show our feeling. He is an actor and public figure. we have the chance to say that he is right or wrong and show our personal feeling to him.
Now u all try to cover the some of Dwe affair.Every people said that he is finding the fun outside bec he is famous and handsome and rich.Just for fun and happy---- So the girls who has the affair with him might be--------- ( how poor the girls are)
By the way, I am not khin Min zaw. I don't know kin Min zaw and both of u all. I am the person who always free.I havealot of time to discuss with u all.Now this web is more interesting than American Democrate debate.
ဟုတ်ကဲ့ အမည်မဲ့ ရေးသူခင်ဗျား ---
ဒီကော်မန့်တွေအားလုံး သေချာဖတ်ရင် သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တခြား မဆိုင်တဲ့အချက်တွေ မပြောလိုပါဘူး။ အမှန်တွေ
အမှားတွေလည်း ခွဲခြားမပြလိုပါဘူး။ စာဖတ်တတ်တဲ့ သူတိုင်း ကျွန်တော်ပြောတာ
((U said that every movie star or artist can do everything they like
if the audience accept their art.))
ကျွန်တော်ပြောတဲ့ထဲမှာ (သရုပ်ဆောင်အပါအ၀င်) အနုပညာသည်တွေဟာ
ပရိသတ်လက်ခံရင်ပြီးရော ဘာမဆို သူတို့ကြိုက်တာ လုပ်ခွင့်ရှိသူလို့ လုံးဝ
ကျွန်တော်ပြောတာ ရှင်းရှင်းလေး အောက်မှာပြန်ပြထားတယ်။
((ကဲ -- ခင်မင်းဇော် ဒီလူတွေကို မကြိုက်ဘူး။ ဒီလူတွေ
လူမှုရေးဖောက်ပြန်တယ်။ စာရိတ္တ မကောင်းဘူး။ သေသွားအေးတာပဲ။
လွမ်းစရာမဟုတ်ဘူး။ ၀မ်းနည်းစရာမဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး သူတို့ အနုပညာတွေကို
အသိအမှတ် မပြုတော့ဘူးလား။)) အဲဒီလိုရေးခဲ့တာပါ။ ဒီဝါကျရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို
မြန်မာစာ ဖတ်တတ်ရင် နားလည်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အပေါ်ကပြောတဲ့
အင်္ဂလိပ်ဝါကျနဲ့ အဓိပ္ပါယ် တူပါသလား။
((ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာ လူတိုင်းထိန်းသိမ်း ရမှာပေါ့။ ဒါဟာ မှန်ပါတယ်။
သို့သော် ဒီနေရာမှာ လာမပြောပါနဲ့။ နေရာနဲ့ အချိန်အခါကို ကြည့်ပြီး
တချို့ကိစ္စတွေက ပြောသင့် မပြောသင့် ချင့်ချိန်ရပါတယ်။ စောင့်ထိန်းသင့်ရင်
စောင့်ထိန်းရပါတယ်။ ဒါဟာ လူ့ကျင့်ဝတ်ကို နားလည်သူတိုင်း သိကြပါတယ်။))
အဲဒါလည်း ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပါပဲ။ ဘာကြောင့်ပြောခဲ့တာလဲဆိုရင် --
မီဒီယာမှာ မီဒီယာကျင့်ဝတ်ရှိတယ်။ သိတိုင်းချမပြရဘူး။ လူမှာလည်း
လူ့ကျင့်ဝတ်ရှိပါတယ်။ မှန်တိုင်းလည်း မပြောရပါဘူး။ စကားခြောက်ခွန်း
လူ၌ထွန်းလည်း လေးခွန်းကိုပယ် နှစ်ခွန်းလွယ် ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးခဲ့တာ ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် --
အဓိကက ဒွေးသေတဲ့အတွက် အားလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ ၀မ်းနည်းကြောင်း
ရေးကြတဲ့ နေရာမှာ ခင်မင်းဇော်ရဲ့ ပထမဆုံး ကော်မန့်က
အားလုံးရဲ့ခံစားချက်ကို ပစ်ပယ်လိုက်တဲ့ပုံစံ ဖြစ်နေလို့ ပြောရခြင်းပါပဲ။
ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာ ((ဒွေးသေမယ့်အစား ရဲလေးတို့
စိုင်းစိုင်းတို့သေပါလား)) ဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက်တွေကို ကျွန်တော် အပါအ၀င်
ဘယ်သူကမှ ဘာမှ ထည့်မပြောခဲ့တာ။ ထည့်ပြောစရာကို မလိုလို့။ အဓိက ဒွေး နဲ့
ပတ်သက်တဲ့အကြောင်း ပြောနေကြတာ မဟုတ်လား။
ခင်မင်းဇော်ရေးတာကိုမှ ဘာကြောင့် ၀င်ပြောကြသလဲ။ ရှင်းပါတယ်။
ခင်မင်းဇော်ဟာ လူတယောက် သေဆုံးလို့ ၀မ်းနည်းတဲ့နေရာမှာ လူတော်လူကောင်းမှ
-- စာရိတ္တကောင်းမှ ၀မ်းနည်းရမယ် နှမြောရမယ်လို့ ခွဲခြားနေသလိုဖြစ်နေတယ်။
ဒီနောက်မှာ ခင်မင်းဇော်ထပ်ရေးတဲ့ ကော်မန့်ကိုကြည့်ရင် ခင်မင်းဇော်ဟာ
သေဆုံးသူဒွေးအပေါ် ခုလိုစွပ်စွဲထားတာကို တွေ့ရတယ်။
(၁) ဒွေးဟာ လူမှုရေး အကျင့်စာရိတ္တ ဖောက်ပြန်သူတယောက်
(၂) ကျော်ကြားမှုကို ခုတုံးလုပ်ပြီး လုပ်ချင်ရာလုပ် စော်ကားသူတယောက်
ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်ကို ကြိုက်သလို လွတ်လပ်စွာ ရေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုစေဦးတော့
အဲဒီစွပ်စွဲချက်ဟာ ဒွေးကို ချစ်ခင်တဲ့ ပရိသတ်အတွက် ဒွေးသေလို့
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က ဒီကော်မန့်ဟာ နေရာနဲ့ အချိန်အခါ မှားနေတယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်ဟာ ဒွေးဇာတ်ကား များများစားစားကြည့်ဖူးသူ တယောက်မဟုတ်ဘူး။
ဒွေးသရုပ်ဆောင်တာကို ကြိုက်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ နာရေးကြောင့်
အများစိတ်မကောင်းဖြစ်နေချိန်မှာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် နဲ့
ခုလိုဝင်ပြောခဲ့တယ်။ ဒွေးဟာ သရုပ်ဆောင်ပဲ သူမှန်တာမှားတာ ကြိုက်သလို
ပြောခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ အချိန်အခါနဲ့ နေရာဒေသနဲ့
ကိုယ်ချင်းစာတဲ့စိတ်ကလေးတော့ ထားသင့်တာပေါ့။ မထားချင်လို့ ပြောမယ်ဆိုလည်း
ပြောပေါ့။ အမြင်မတော်သူတွေ ၀င်သမတာ ခံရမှာပေါ့။ ကျွန်တော်က
တခုရှိတာက ဒွေးရဲ့ ပစ်ချက်တွေကို ကျွန်တော်တို့က ၀ိုင်းပြီး
သူဘယ်လိုပစ်ချက်ရှိရှိ သူသေတဲ့အခါ ဒီပစ်ချက်တွေကို သူ့ပရိသတ်တွေက
မေ့လျော့နိုင်၊ ခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီး ၀မ်းနည်းနေကြတာဗျာ။ အများစုရဲ့
လူတယောက် လက်ဖြတ်လိုက်ရတာမဟုတ်ဘူး။ ခြေထောက်ဖြတ်လိုက်ရတာမဟုတ်ဘူး။ ဘ၀ တခု
လူကောင်း လူတော်မှ စာရိတ္တ ၁၀၀% ဖြူစင်သူ သေမှ ၀မ်းနည်းတသ ဖြစ်ကြရမှာလား။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသေတော့ လူတကာ ၀မ်းနည်းကြတယ်။ ဦးစောသေတော့ ၀မ်းသာတယ်။
ဒါကဖြစ်သင့်တယ်။ အခုဟာက ဒွေးက ဗိုလ်ချုပ်လည်းမဟုတ်၊ ဦးစောလည်း မဟုတ်။
သူဟာ တိုင်းပြည်တည်ထောင်သူလည်းမဟုတ်။ တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးသူလည်းမဟုတ်။
သူဟာ ပြည်သူချစ်သော အနုပညာသည်တယောက် ---
ဒါကို သိဖို့ နဲ့ လက်ခံဖို့ပါပဲ။
To Anonymous who wrote comment at9:15am on 21/07/2007,
You said, "One of Ko Thit Sar comments said that why sai sai Khan Hlaing and Ye lay did not die?"
May I know what time and which date did he mention about Sai Sai and Ye Lay? I didn't see that comment. People who read comments are not less than ten years old. You should not cheat to people. Do you want Sai Sai and Ye Lay's fan to fight with ko Thit Sar? Your wrong comment can attract only careless reader like you. Ha Ha ...Very funny idea. Try to compete honestly. Beagood debater!!
7/21/2007 4:54 PM
Carry on, all correct, we are supporting you who make all good explanation truly and
7/21/2007 5:35 PM
Hi! Khin Min Zaw,
You not dare to write suchastupid comment. right?. You've already stopped. Should be this way. Shout anything suchastupid idea with your small brain in your blog until you die. Pls advise kindly,next time,be careful whatever you do. O.k !!!!
7/21/2007 6:25 PM
To Ko Thitsar,
You are right. I agree with you. You have given good explanations. You are good in writing. You know how to write the things in good and polite manners. I hope that your explanations will beagreat consolation for all those who are sad of Dwe's death. Thanks for these valuable explanations. One, like you, who hasagood heart, has always right explanation which is not without the influence admirable and efficacious. Withasincere heart, I would like to say that you areagood example for all the persons who have written all these comments above.
7/22/2007 2:32 PM
Appreciate!!!! Ko Thitsar
7/23/2007 2:00 AM
Thank you again for your very good and very polite explanations.I am sure that most of people who are intellent will agree with you and will support you.
I dont want to say anything about Dwe's character. But, I just want to ask for his " A Yoe Oo Zay Di" at Chaung Wa.
As he is notapowerful monk, why was his bone ash buried and stored in tha pagoda at Chaung Wa?
Hope someone can explain me, please... Thanks....
7/23/2007 7:35 AM
As you say above, u will stop after 14/07/07 comment. Why u write again with other name(mg gyi fr village). R u forgetful (or)not dare to talk (or) can't accept the truth (or) afraid of Ko thitsar (or)hit urself with ur testing bomb,etc.You and Ko thitsar are very much different and don't compare it.One more, He isaman.really!!!You don't believe? So so!!! Hmn hmn
ကိုသစ္စာ ခင်ဗျား မင်္ဂလာပါ နေကောင်းကျန်းမာပါစေ.. ကိုသစ္စာ ယောင်္ကျားဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ပြောလို့ကိုယ်ယုံလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်က ကိုသစ္စာရဲ့ပထမဦးဆုံးစာကို ဖတ်ပြီး ကျွန်တော် ကျမ တလုံးမှမပါအောင် သတိထားပြီး ရေးထားတယ်ထင်လို့ အမျိုးသမီးဖြစ်မယ် လို့ဆားပုလင်းနှင်းမောင် လုပ်ပြီးအကဲဖြတ်လိုက်တာပါ.. ဒုတိယစာရဲ့အပေါ်ဆုံးစာပိုဒ် စာ ၁၀ ကြောင်းလောက်ထဲမှာ ကျွန်တော် စကားလုံး ၅ လုံးတောင်ပါလာတဲ့အတွက် အင်း..ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ နောက်အဓိကတွေ့ မိတာက ကိုယ်နဲ့ သဘောထားအမြင်ကွဲလွဲတဲ့ (မိန်းမတယောက် ဖြစ်တာသေချာတဲ့ ) မခင်မင်းဇော်ကို ယောင်္ကျားရင့်မကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုသစ္စာက လူတွေheart ထိနိုင်တဲ့angleကနေ အတင်းလိုရာဆွဲယူ ရေးထားတာဖတ်လိုက် ရတော့ တကယ်ယောင်္ကျားတယောက်ဆို ဒီလောက်တောင်ရေးပါ့မလားလို့ကိုယ့်အနေနဲ့ (ယောင်္ကျားတယောက်အနေနဲ့ ) သံသယဖြစ်မိတာပါ..
လူမှုရေးကိစ္စ ချဉ်းကပ်တဲ့နေရာမှာ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး မြင်ထောင့်ချင်းမတူဘူး ထင်လို့ ပါ.. ကိုယ်တို့ အမျိူးသားတွေက မဟာဖိုဝါဒီတွေ များတယ်လေ။ ကိုသစ္စာကို အမျိုးသမီးထင်ပြီး ဒီလိုအမြင်ရှိနေတာ ကိုယ်အံ့သြလိုက်တာပါ..နောက်ပြီး အရမ်းခေတ်ရှေ့ရောက်နေတဲ့ လွတ်လပ်စွာ ကလေးဖျက်ချခွင့်ကိုတောင် တောင်းဆိုနေတဲ့ ကိုယ်တို့ မြန်မာ အမျိုးသမီး အုပ်စုတွေထဲကတယောက်ယောက်ထင်မိလို့ပြောနေရတာပါ။ ကိုယ်အဲဒါကို လုံးဝသဘောမတူဘူး။မြန်မာပြည်ထဲကလဲ ဘယ်သူမှသဘောတူကြမယ် မထင်ဘူး။
(Snake, Snake.. See the legs နော် ) ဘေးနဲနဲချော်သွားရင် စာဖတ်သူတွေကို တောင်းပန်ပါတယ်။ဖြစ်နေတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရှယ်ပေးလိုက်တာပါ……
ကိုယ်ကတော့ လူမှုရေးထက် နိုင်ငံရေးအကျင့်စာရိတ္တအပေါ်ကို အကဲဆတ်တယ်။ Sensative ဖြစ်တယ်။ ကိုသစ္စာရဲ့ စာတွေမှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို အဆိုးမြင်များနေတာ တွေ့ နေရတယ်။ စာနှစ်စောင်လုံးမှာ ပါနေတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ်ငေါက်ကနဲထပြီး ၀င်ပြောလာ ရတာပါ။ ဒီကနေ့ ကာလ မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံရေးလုပ်သူတွေဟာ လူဆန်ဆန်မနေရတဲ့ ဘ၀ကနေ လူဆန်ဆန်နေရ နေနိုင်တဲ့ ဘ၀ရောက်အောင် ကြိုးစားနေသူတွေ ဖြစ်တယ်။ လူတိုင်း နိုင်ငံရေးလုပ်ရမယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
ကိုသစ္စာ အင်တာနက်ပေါ်က မြန်မာစာမျက်နှာတွေကိုစုံအောင် ဖတ်ဖူးမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်နာမည်ကို အစောကြီးထဲက သိမှာပါ။ www.tayzathuria.org/uk ကို ဖတ်ဖူးနေရင် ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းကို ကိုယ်ဝေဖန်ထားတဲ့ ကော်မန့် လေးကို တွေ့ ရမှာပေါ့။ ပြန်ရှာကြည့်လိုက် ပါ.တွေ့ ပါလိမ့်မယ်။ အတွေးအခေါ် ငြင်းခုန်ရတာ ကိုယ်ကြိုက်တယ်။ အဓိက က ငြင်းခုန်ရင်း ဆွေး နွေးရင်းနဲ့အမှန်တရားနဲ့ နီးစပ်လာဖို့ ဘဲ လိုတာမဟုတ်လား။
မနက်ဖန်ဆိုရင် မင်းသားကွယ်လွန်တာ နှစ်ပါတ်ပြည့်ပြီ..ဆွေးနွေးတာ တော်လောက်ပါပြီ။ စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ်တို့ စာတွေဖတ်ပြီး တခုခုပေးလိုက် နိုင်ကောင်းရဲ့ လို့ယူဆပါတယ်။ ကဲ…အားလုံး မင်းသားကြီးကျော်ဟိန်းရဲ့ဘ၀နေနည်းကောင်းဆိုင်ရာ သီချင်းလေး နားထောင်ပြီး ရှေ့ ရှောက်တဦးချင်း ကိုယ်စီဘ၀တွေမှာ ဘာကောင်းတာလေး တွေလုပ်ခဲ့ကြမှာလဲ စဉ်းစားကြရအောင်..လုပ်ကြရအောင်နော်…။
မြစ်များ အား လုံး စီးဆင်းသွားကြတယ်. ဘယ်များရောက်သလဲ… လူသားအားလုံး သိတယ်.ပင်လယ်ကြီးဘဲ….လူသားအားလုံးရဲ့အဆုံးသတ်ဟာ သေခြင်းတရားဘဲ.. ဘ၀ ပိုပီပြင်ဖို့လိုတယ်….
မှောင်နေရင်လေ မီးထွန်းလိုက်..နာကျင်သူကို ပြုစုလိုက်…ဆာလောင်သူကို ကိုယ့်အထဲက တ၀က် ဝေမျှလိုက် ….. လူတွေစဉ်းစားကြ.စဉ်းစားကြ..လောက…သင်ဟာ သမိုင်းကြောင်းဖို့တခုခု လုပ်ခဲ့သလား…..
သင်ဟာ သမိုင်းကြောင်း ကောင်းဖို့တခုခု လုပ်ခဲ့သလား………
သင်ဟာ သမိုင်းကြောင်း ကောင်းဖို့တခုခု လုပ်ခဲ့သလား………………………
စာကြွင်း…. ကိုယ်တို့ ဒီလိုအင်တာနက်စာမျက်နှာတွေပေါ်ကို တက်နိုင် ဖတ်နိုင် ရေးနိုင်သူတွေ ဟာ တစုံတရာCan Do နိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အမြင်ကို အေးအေးဆေးဆေး ပြောကြတဲ့ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားအောင် အားလုံးဝိုင်းကြိုးစားကြရင် မကောင်းပေဘူးလား။
ကိုယ်ကတော့ နောက်လည်း အမြင်မတူတာ အမြင်မတော်တာတွေ့ ရင် ဘယ်မှာဘဲ တွေ့ ရ တွေ့ ရ ၀င်ပြောနေအုံးမှာဘဲ။ အဲဒီလိုပြောလို့ဆဲရင်ဆဲ..လူတွေ့ ရင် ရိုက်ချင်လာရိုက်… သတ်နိုင်ရင်လည်းသတ်…ကိုယ်ခံပါ့မယ်။ အဲတခုဘဲ ရှိတယ်.ကိုယ့်အမြင်ကိုတော့ ဘယ်အခြေ အနေဘဲရောက်ရောက် ပြောနေမှာဘဲ။
တကယ်တော့ ကိုယ်တို့ အားလုံး အမှောင်ခေတ်ထဲက လူသားတွေ မဟုတ်ပါလားဗျာ……….
U come again by mg gyi(fr village).
Now,u realize and see the truth. welcome back.
Sadu Sadu Sadu for accept the truth.
Accoding to poppular journal, Actor Dwe family will not build the Ah-roe Oo sae di in Chaung wa.It is said that Shin saw pu pagoda in sanchaung township was built on the place which the ash of Shin saw pu buried.And there is the little pagoda (near the twen taee)was built on the ash of Min ye Kyaw Swar who was killed by
on King during the war of MOn-Bamar.(according to U phoe Kyar Myanmar's yarzawin, I dare not say exactly, i forgot alittle bit). So may be we can build the ah yoe OO sae di of some famous person. Min Ye Kaw swar is very famous for brave and Shin saw Pu is only one queen in History (and the person who renovate the Shwe dagon Pagoda). For Dwe...... I don't know why his family at first consider to build the zaedi. May be he was one powerful king or prince in the previous life like his uncle Kyaw Hein.
Hello A u ma gyi Khin Minn Zaw
Whatashame, you are the looser :P
7/23/2007 12:29 PM
why don't u think that i am Khin min zaw. I am much younger than her. I just wonder that most of u cannot differentiate who is khin min zaw and who is others. Try to see the reality--- ok?
တောကမောင်ကြီး ခင်ဗျား ---
ဆွေးနွေးချက်က တော်တော်လေး ဘေးချော်နေလို့ အမှန်တကယ် ဘာတခုမှ
ထပ်မပြောလို၊ ပြောချင်စိတ်ကို မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့
ကျွန်တော့်နာမည်တပ်ထားတာက တကြောင်း၊ နောက်ထပ် လွဲချော်မှုတွေကို
(အံ့သြစွာ) ထပ်တွေ့နေရတာက တကြောင်းကြောင့် ဒီကော်မန့်ကို
တောကမောင်ကြီး ထပ်ရေးနေသမျှ ထပ်လွဲချော်နေဦးမှာပဲလားတော့ မသိပါ။
(၁) ((ပထမဦးဆုံးစာကို ဖတ်ပြီး ကျွန်တော် ကျမ တလုံးမှမပါအောင် သတိထားပြီး
ရေးထားတယ်ထင်လို့ အမျိုးသမီးဖြစ်မယ် လို့ဆားပုလင်းနှင်းမောင်
လုပ်ပြီးအကဲဖြတ်လိုက်တာပါ..)) ပထမဆုံးစာမှာ ကျွန်တော်/ ကျွန်မ -
မသုံးရုံနဲ့ (နာမည်မှာ 'ကို' တပ်ထားသော်လည်း) ကျွန်တော့်ကို မိန်းမလို့
ထင်တဲ့အပြင် ((ကိုသစ္စာဟာ အမျိုးသမီးများဖြစ်နေမလားလို့ ။ အမျိုးသမီးတောင်
နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်းလုပ်ခဲ့တဲ့ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့သူတယောက် နာမည်ဝှက်နဲ
့ရေးတာလို့ကိုယ်ခန့် မှန်းတယ်။ ဟုတ် တယ် ဟုတ်………………….့ )) ဆိုပြီး
မိန်းမတောင်မှ နိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့ မိန်းမလို့ ထင်ခဲ့တယ်။ ဘာကိုမှ
အခြေအမြစ် တိတိမကျမသိဘဲ အဲဒီလို ရမ်းသမ်းစွပ်စွဲပစ်လိုက်တာကိုက အတော်
(၂) နောက်ကော်မန့်မှာ ကျွန်တော်လို့သုံးလိုက်တော့ ((ကိုသစ္စာ
ယောင်္ကျားဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ပြောလို့ကိုယ်ယုံလိုက်ပါတယ်။ )) တဲ့။
ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောသလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော့်စာကို သေချာဖတ်ကြည့်ပါ။
((ကျား/မ လိင်ခွဲခြားတာလဲ မိမိသဘောကျ ခွဲခြားထင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ
ဆွေးနွေးချက်ထဲ အရေးတယူ ထည့်ရေးရန် ကိစ္စ မဟုတ်ပါ။)) အဲဒီလိုသာ
တောကမောင်ကြီးဟာ ကိုယ်ပြန်ရေးမယ့် စာကိုတော့ သေချာဖတ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
[အမှန်ပြောရရင် ပထမကော်မန့်မှာ ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ စာလုံးကို
သတိထားပြီးရှောင်ရှားနေခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ တောကမောင်ကြီး ပြောမှ
ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ကြည့်မိပါတယ်။ နောက်ကော်မန့်တခုမှာ ကျွန်တော်ထည့်ဖို့
လိုအပ်တဲ့အတွက် သုံးတယ်။ တမင် ကျွန်တော်တွေ ထည့်သုံးထားတာ မဟုတ်ဘူး။
လိုလို့ သုံးခြင်း၊ မလိုလို့ မသုံးခြင်းမျှပါပဲ။ နာမ်စား အသုံးအနှုန်း -
ထည့်မထည့်ဆိုတာကို အဲဒီလောက်ထိ ဂရုမစိုက်မိတာ အမှန်ပါ။ ဒါက
ကျွန်တော် ထပ်အံ့သြတာက အရှေ့ကော်မန့်မှာ ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ လွဲချော်ချက်
(၁၀) ချက်ကို ပြန်လည် မချေပ မဆွေးနွေးဘဲ မဆိုင်တဲ့ အချက်တွေ
(၃) ((မခင်မင်းဇော်ကို ယောင်္ကျားရင့်မကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုသစ္စာက
လူတွေheart ထိနိုင်တဲ့angleကနေ အတင်းလိုရာဆွဲယူ ရေးထားတာဖတ်လိုက်
ကျွန်တော် လိုရာဆွဲယူရေးသားချက်များဟာ ဘယ်ဟာပါလဲ။ heart ထိနေတဲ့ လူတွေကို
နာအောင် ဘယ်သူကလုပ်ထားတာလဲ။ စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲခဲ့တာ ဘယ်သူလဲ။ တကယ်တမ်း
လိုရာ ဆွဲယူရေးတာ ကရော --- ခင်မင်းဇော်လား၊ ကျွန်တော်လား၊ ဒါမှမဟုတ်
တောကမောင်ကြီး ကိုယ်တိုင်လား။ ကော်မန့်အားလုံးကို
(၄) ((အရမ်းခေတ်ရှေ့ရောက်နေတဲ့ လွတ်လပ်စွာ ကလေးဖျက်ချခွင့်ကိုတောင်
တောင်းဆိုနေတဲ့ ကိုယ်တို့ မြန်မာ အမျိုးသမီး
အုပ်စုတွေထဲကတယောက်ယောက်ထင်မိလို့ )) အဲဒီကိစ္စတွေ ကျွန်တော်သိလည်း မသိ၊
ကျွန်တော်နဲ့လည်း နီးစပ်မှု မရှိပါဘူး။ အခုလို လက်လွတ်စပယ် လိုရာဆွဲယူ
ထင်တာကို အလွန့်အလွန် အံ့သြမိပါတယ်။
(၅ -က) ((လူမှုရေးထက် နိုင်ငံရေးအကျင့်စာရိတ္တအပေါ်ကို အကဲဆတ်တယ်။
ဒါလဲ အံ့သြစရာ လွဲချော်ချက်ပါပဲ။ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာနေရင် လူမှုရေးဆိုတာ
နားလည်ရမှာပါ။ လူမှုရေး နားလည်မှလည်း နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာ
လိုက်လျောညီထွေ အဆင်ပြေစွာ လုပ်နိုင်မှာပါ။ လူမှုရေးမှ နားမလည်သူတယောက်ဟာ
လူအားလုံးကို အဆင်ပြေစွာ အုပ်ချုပ်ဖို့ (တနည်းအားဖြင့်)
လူတွေနေထိုင်နေတဲ့ နိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံကို ကောင်းမွန်စွာ ကိုင်တွယ်
ထူထောင်ဖို့ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ လူမှုရေး သိတတ်စွာ ပြောသင့်မပြောသင့်၊
ပြောအပ် မပြောအပ်၊ နေရာနဲ့အချိန်အခါ ခွဲခြားတတ်ခြင်း ဟာလည်း
နိုင်ငံရေးလို့ ဆိုရမှာပါပဲ။ တကယ်တမ်း နိုင်ငံရေး လုပ်နေသူတွေဟာ
ဒီအချက်ကို သတိကြီးစွာ လက်ကိုင်ထားသင့်ပါတယ်။
(၅-ခ) ((နိုင်ငံရေးလုပ်သူတွေဟာ လူဆန်ဆန်မနေရတဲ့ ဘ၀ကနေ လူဆန်ဆန်နေရ
နေနိုင်တဲ့ ဘ၀ရောက်အောင် ကြိုးစားနေသူတွေ)) လို့ တောကမောင်ကြီးက
ဆိုထားတယ်။ လူဆန်ဆန်နေရ နေနိုင်တဲ့ ဘ၀ရောက်အောင် ကြိုးစားနေသူ
နိုင်ငံရေးလုပ်သူတွေအဖို့ လူမှုရေးဆိုတာ အရေးမကြီးပေဘူးလား။
((လူမှုရေးထက် နိုင်ငံရေး အကျင့်စာရိတ္တ)) ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကလည်း
ထူးဆန်းပါတယ်။ အကျင့်စာရိတ္တ မှာ နိုင်ငံရေးအကျင့်စာရိတ္တ၊
လူမှုရေးအကျင့်စာရိတ္တ ဆိုပြီး ခွဲထားပါသလား။ ကျွန်တော်တော့ မကြားဖူးပါဘူး။
ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေနဲ့ ခွဲခြားထားသလဲ သိချင်ပါတယ်။ ဗဟုသုတ အလို့ငှာပေါ့။
(၆) ((ကိုသစ္စာရဲ့ စာတွေမှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို အဆိုးမြင်များနေတာ တွေ့ နေရတယ်။))
ဒီစွပ်စွဲချက်ဟာလည်း အံ့သြစရာပါပဲ။ အစတုန်းကတော့ ကျွန်တော်ဟာ
နိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့သူ/ လုပ်နေသူ တယောက်တဲ့။ ခုတော့
ဒီစကားမျိုးပြောနေပြန်ပါပြီ။ ကဲ --- နိုင်ငံရေးသမားတွေကို
ကျွန်တော်အဆိုးမြင်တဲ့ အချက် ကျွန်တော့်စာရဲ့ ဘယ်နေရာတွေမှာ ပါနေပါသလဲ။
ကျွန်တော် အခု ထောက်ပြသလို တချက်ချင်း ထောက်ပြပေးပါ။ ကျွန်တော်
တချက်ချင်း ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးပါမယ်။ ကျွန်တော်ဟာ အဆိုးမြင်ဝါဒီတယောက်
(၇) အင်တာနက်ထဲက မြန်မာစာတွေတိုင်း စုံအောင်ဖတ်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော့်မှာ
အဲဒီလောက်အားမနေပါဘူး။ အခု ဒီကော်မန့်ကိုလည်း စရေးမိလို့သာ
ဆက်ရေးနေရတာပါ။ တကယ်က အချိန်ကုန်ပါတယ်။ ဘေးက ဖတ်သူတွေအတွက် တစုံတရာ
အကျိုးရှိရင်တော့ ကျွန်တော် အချိန်ကုန်ခံပြီး ရေးရကျိုးနပ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းကို ဝေဖန်ထားတာတွေ ကျွန်တော်မဖတ်ဖူးပါဘူး။
ဖတ်ဖို့လည်း အချိန် မပေးနိုင်သေးတာ ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျာ။
(၈) ဆွေးနွေးတာတွေ တော်လောက်ပြီဆိုတာကလည်း တောကမောင်ကြီးတို့
ကျွန်တော်တို့က ဆုံးဖြတ်ပေးရမှာ မဟုတ်ပါ။ လူတိုင်း ဆက်လက်ဆွေးနွေးခွင့်
ရေးသားခွင့်ရှိနေတာပဲ မဟုတ်လား။ တကယ်လို့ တောကမောင်ကြီးအနေနဲ့
တော်ချင်ရင်လည်း တော်လိုက်ရုံပါပဲ။ ကျန်သူတွေ အနေနဲ့ကလည်း
သူတို့သဘောပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ပြောစရာ မဟုတ်ပါ။
(၉) ကျွန်တော်ကတော့ ကျော်ဟိန်းရဲ့ သီချင်းနဲ့ ဘ၀နေနည်းကောင်းအောင် နေမှာ
မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်ရာ လူမှု ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့
လိုက်လျောညီထွေစွာနေထိုင်ရင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆရာသမားများရဲ့
ဆုံးမစကားတွေကို နားထောင်ပြီးသာ ဘ၀နေနည်းကောင်းအောင် နေထိုင်
(၁၀) ((ကိုယ်ကတော့ နောက်လည်း အမြင်မတူတာ အမြင်မတော်တာတွေ့ ရင် ဘယ်မှာဘဲ
တွေ့ ရ တွေ့ ရ ၀င်ပြောနေအုံးမှာဘဲ။))
အမြင်မတူတာကို ပြောဆိုဆွေးနွေးတာကို လက်ခံပါတယ်။ အမြင်မတော်လို့
၀င်ပြောတဲ့အခါတော့ နည်းနည်း သတိထားစေချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
အဲဒီလိုဝင်ပြောတဲ့အခါမှာ ကိုယ်တိုင်က အချက်အလက်တိကျရတယ်။ ကိုယ့်စကားကိုယ်
တာဝန်ယူနိုင်ရတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတပါးရဲ့ အချက်အလက်ကိုလည်း သေချာပြန်ထောက်
ပြနိုင်ရပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်နိုင်မှသာ ၀င်ပြောပေါ့ခင်ဗျာ။ မဟုတ်ရင်
အမြင်မတော်လို့ ၀င်ပြောသူကိုယ်တိုင်က မတော်တရော်တွေ ပြောမိနေရင် ---
ပြောသာပြော၏ မထိရောက် ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ --- တောကမောင်ကြီးအနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်
အမှောင်ခေတ်ထဲကလို့ သတ်မှတ်ရင်တော့ အမှောင်ခေတ်ထဲက လူသားပေါ့။
ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဒီလို မသတ်မှတ်ပါဘူး။ ဘယ်နေရာမှာနေနေ
ဘယ်ဒေသကို ရောက်ရောက် ဘာအယူဝါဒလွှမ်းမိုးတဲ့ လူတွေများပြားနေပါစေ
ကိုယ့်စိတ် ကိုယ့်သန္တာန် ကိုယ့်ခံယူချက်က မှန်ကန်နေပါရင်၊ အမှန်တရားကို
သိမြင်နေပါရင် အမှောင်ထဲမှာနေသော်လည်း တကိုယ်စာ လင်းနေပါတယ် --- လို့သာ
I don't know how to express you are correct.Each of ur words is meaningful, justic, true. All ur words are directly hit hearts of Khin Min Zaw and people who support her. Don't care abt this Khin Min Zaw and group so called political mans.
Thks for ur very kind,polite & meaningful long explanation.
7/24/2007 5:42 AM
Khin Min Zaw,
Don't scare. Just shoot to the sky.Ko Thitsar isn't going to eat u. He is very kind person not like you(talk anyhow). By the way, r u "LU" or "LUU".u know "LUU" language right?
7/24/2007 5:48 AM
We all stand by ur side. Why people are not khin min zaw side.Very simple.You're right! She is totally wrong.very clear and obvious by reading in this blog.
Everybody want the truth except khin min zaw. I've alrd explained her in khin min zaw' blog. She banned my post. Why did she so scare? I said don't worry,just shoot to sky.
7/24/2007 6:24 AM
Excuse me people, don't blame Khin Min Zaw. She is under very small place and with small brain. Some more stubborn like our government.
Hello very pitiful Khin Min Zaw,
come out and see to the world.
I hope you will understand and see the truth.
7/24/2007 6:43 AM
((အရမ်းခေတ်ရှေ့ရောက်နေတဲ့ လွတ်လပ်စွာ ကလေးဖျက်ချခွင့်ကိုတောင်
I also dont know about that from ko thitsar comment.
How drag in that words here?? Amazing !!!
Thank you for explaination about " Ah-roe Oo zay di"... But...
7/24/2007 8:32 AM
Ma Khine said
I like these words Ko Thitsar.
You are good writer.You know how to reply and talk people to understanding.
KO THIT SAR
don't waste your precious time for the rubish khin minn zaw, she or he talk nonsense, sa kar dweashay.anauk ma nyi bu. What political, if he/she genuinely doing political, go and check her blog, she/he even don'tknow which one is burma flag, just make use of political, all rubbish people, People who really doing the political work never mention/said like that kind of bullshit. Anyway I fully support all your comments, you are very smart and truth.
Hi Ko Thitsar & Ko Sai_Bruce,
I totally agree all of your comments.
Ko Thit Sar don't waste your time for this rubbish Kin Min Zaw & Mg Gyi from Village.
I really don't understand how they are working for our country political???
Really scare for our country future...because of these small/stupid brain people.
7/25/2007 1:40 AM
latest news!!! Khin Min Zaw can not come out and see our world. She can not hear as well. Because she is in the HELL now.
R u sure KhinMin Zaw is in the "HELL"?. Mg gyi(fr village)dosen't believe this. He is going to look now.
Very Good!!! Khin Min Zaw is waiting for MG Gyi(fr village) at the "HELL" now.
She need the support from u.
Khin Min Zaw (a) Mg Gyi(from village),
A Mya, A Mya, A Mya
Mg Gyi (from village),
As Ko Thitsar say above,better check all ur words before u talk.
Pls don't talk nonsense words any how in the air. you don't fight and don't try to compare with Ko Thisar who is wisdom. sky and ground. Just remind u and pls understand the truth.
Are you really invisible?? Please save the hell before Mg Gyi(from village) goes and sees Khin Min Zaw in the hell, or else "poor hell" will be destroyed by these two small-brain politic people.
dway is notabad person.. he just found the one he love apart from his wife. he spend his entire life with this two women until he died . so can not accuse him as losing charatar
7/25/2007 10:29 AM
Ko Thit Sar,
Ko Thit Sar read poet Ma May si ka kabyar ko pyan pyin yae pay lite par tal.
"Sin chin tone tayar kinn maet kya kone thaw
Mg Gyi from village and Khin Min Zaw arr
Ma myin ya thaw eyes
hto thu toet ei sagar
Ma kyar ya thaw ears
Ko Thit Sar and Ko Dway's fans arr shi sae..."
Mg Gyi (fr village) has already realized and understood (Ahmyin taw thwa pyi) now. They are going to apologise you. Pls accept.
Thks again Ko Thitsar, for very good explanation for those two (with stupid/small brain)people Khin Min Zaw and Mg Gyi (fr village).
7/26/2007 6:48 AM
pls dont say about ko thar gyi's bad things.. he is notabad person.. ofcourse he has another love apart form his wife. but he is not play around with others girl.. he spent his entire life with two women he loved.. that is notastrange case , especially celebrity like him.. now day most of the men r play around n betray to wife.. he go out with that girl to public n even his wife accept for that. why dont we talk rubbish about the person who already passed away.. let him stay peacefully in somewhere...
7/26/2007 8:36 AM
Sorry, I just curious. I really don't know the another lady who got the love from Ko Dway?? Can I know the name? If you don't wnat to reply on this page, please reply to my mail pwia_2006@yahoo.com.sg
Me too. Me too. I want to know the girl's name too if Ko Dway really had another one apart from Ma Moe, but I can tell you that it's not Khin Min Zaw for sure. :P
Definitely That girl is not Khin Min Zaw. Dwe never never ---- Khin Min Zaw.That's why she hate himalot and destroy everybody who like dwe. Anyway she is in the "HELL" now. pitiful Khin Min Zaw.
that lady name is Kalyar Swe,:)
Hi Ko Sai_Brauce,
Thanks for your info. Is she actress?
Is she is actress?
No, she is not actress, but very pretty, she really love ko thar: gyi as well, Ma Moe knew all this matters but due to her medical problem she can't get children that's why she let him carry on.Ko Thar: Gyi and Ma Kalayar was together for more than7years.
Hi Ko Sai_Bruce,
Thank you for your information. Did she come to Ko Dway's funeral? I hope she feels better in someday.
Just want to know where we can get she and Ko Dway together photo?
7/27/2007 1:39 AM
Are they married legally?
7/27/2007 3:25 AM
hello ko/ma anonymous,
If you want to get the picture of ko dway and ma kalayar, you can go get it in the heaven because ko dway took it with him. :P
7/27/2007 6:14 AM
Have you ever heard that people marry illegally? :P
that lady is on fashion business. she hasashop in dagon center.. i saw her photo in magazine one time that was the function of donation money to HIV patients(after they make big misic concert at kandaw gyi " red ribbon night")
No, they weren't married legally, I do have their pictures but I don't think that's the good idea to put it here :) sorry for that.but FYI I am their close friend.:)means, Ma Moe and Ma Kalyar.
7/27/2007 9:02 AM
thank you for your info: so pls share us , about what you know.. if possible ... really interesting in that .... so share something about their trangle love
Why everyone is interesting about Dwe & Kalyar? Even if YES, he is gone. Let them alone! & B "peace".
7/28/2007 4:22 AM
Thease proverbs are not what I make, I just copied them fromawebside for everyone.
"There are two rules for success: 1) Never tell everything you know. - Roger H. Lincoln
News is something someone is trying to hide. Everything else is just advertising. - William Randolph Hearst"
7/28/2007 6:32 AM
A joke fromawebsite for everyone.
"The most unfair thing about life is the way it ends. I mean, life is tough. It takes upalot of your time. What do you get at the end of it? A death. What's that,abonus? I think the life cycle is all backwards. You should die first, get it out of the way. Then you live in an old age home. You get kicked out when you're too young, you getagold watch, you go to work. You work forty years until you're young enough to enjoy your retirement. You do drugs, alcohol, you party, and you get ready for high school. You go to grade school, you becomeakid, you play, you have no responsibilities, you becomealittle baby, you go back into the womb, you spend your last nine months floating... you finish off as an orgasm. - Anonymous"
7/28/2007 6:46 AM
အကဲ့အရဲ့လွတ်သောသူမည်သည် လောကမှာမရှိ။ ဘုရားရင်ကိုယ်တောင်တိုင်မှ အကဲ့ရဲ့ မလွတ်၊ လောကဓံ မှမလွတ်နိုင်သေးလျှင် သာမာန် ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မူ အဘယ်မှာ ဆိုဖွယ်ရာ ရှိပါအံ့နည်း။
i dont want to mention who is right nand who is wrong .. but i would like to suggest only one things..please stop taliking n critizie about bad things about him.. lets pray for him to rest in
peaceful place like heaven. ofcourse he will because he did so many good things especially for the people who live with HIV.
let him stay away and free from this crule world
7/28/2007 10:15 AM
Are you really close friend of ma moe and ma kalyar? If it is true, they have gotabad friend like you.Why did you create triangle love? It is not your business and everybody will not know whether it is true or not except Dwe and ma moe. Do you want to beapopular man/lady in this blog? If you want to beapopular person, try to find out some other ways. Don't use other people's moral as your stepping stone. Try to become an ethical person.
Please read wisely all msg in this blog.
7/29/2007 3:19 PM
I totally agree with what ko/ma lwan thu said. People shouldn't advertise themselves by using other people's moralities.
7/29/2007 9:06 PM
hello Ko/Ma Lwan Thu
YES, I am very close friend with Ma Moe & Klayar, so what??? did I mention anything bad about them??? back off man, I just answered what people asked, who do you think you are?? this is my freedom to say what I want to say OK, as long as I didn't make use or damage other's personal, the whole burma knew about Ko Thar: Gyi, Moe Moe and Kalyar. Zip up baby
ah mal lay taw,tor tor arrr gya dal ,hote larr?the most truth is overdose,more than it should be.
i think we should sugget ma may to add up one things in heading.. this is only for whoever love actor dway.. everyone came with curious mind and read.. after that make comment.. if the person is notadway fan , just leave without saying anything...
7/30/2007 9:42 AM
Mr/Miss/Mrs Lwan Thu
If I want to be popular why should I come to this blog,I am notabad person like you, the meaning of BAD person is people who critizie others without knowing anything,THINK WHO SHOULD BE THE BAD PERSON, if I want to be popular, not necessary to be inthis blog, I just simply go to any journal in burma. In my comment(reply) i didn't mentioned any bad thing about Ko thar: gyi At ALL, I just said the truth.sorry byar Ma May.... your blog is inamess becoz of all those nonsence
We are from Burma too, but we did not know about Ko Thar Gyi, Ma Moe and Ma Kalayar. awww...may be just because we live in the upside of the air and they live in the down side of the air, so that we didn't get any smell from them.(sorry, Ko Thar Gyi..just joking) By the way, we re-read all of those comments again and again, but we couldn't find anyone who asked you that you are Ma Moe and Ma Kalayar's close friend or not.We just understood that you convinced people to believe in your words by expressing yourself that you're their close friend.If you really areaclose friend of them, could you please bring any certificate letter from them to certify people that you really are their close friend? Really! We would rather to have 1000 enemies(not Myo Gyi's song) instead of havingafriend who is hidingaknife at the back of him. Really!
yes! i support what bu.su.kyu said..if you are close friend of them , can u mention one of their emial? it would be very grate.. we can send our codolence to them personally.. we dont want to ask about their affair, we just want to say how sorry we are for their loss.
7/30/2007 4:36 PM
We can watch ko thar gyi's funeral video at www.all-chanel.com
Sorry,everyone!It's www.all-channel.com or
zip your mouth everyone! you know why ? he sucided
8/01/2007 1:07 AM
thait paw tar pae. Lu zoe!
8/01/2007 9:40 AM
well after i read all these i think its more and more getting serious. heere is my some comments.
yes i support what ko sai said, most of the people know about ko thar gyi and ma kalaya , i am used to be her shop regular coustomer and yes we can see their couple almost everywhere.i think its doesn't make any sence . we are just sharng the news that we didn't put him to bad image. may be will thanks us to announce for him. who knows? i will check it out for their email ....
8/03/2007 10:09 AM
now is Tar Yar Min Wai. :(
8/07/2007 6:07 AM
200 မြောက် ကွန်မန့်ဖြစ်အောင် ၀င်ရေးတာ...